Porn-related ED2၏ပုံပြင်များ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - အပိုင်း ၈ တွဲ
Porn-related ED2၏ပုံပြင်များသည်အပိုင်း ၈ ပိုင်းပါသောပုံပြင်များဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသားများမှကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာတင်ဆက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်ဤ porn-induced ED thread နှင့် forum section ကိုကြည့်ပါ။
ok, ဒါကြောင့်ငါပြဿနာများတစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့သို့မဟုတ်နောက်ကျောအစောပိုင်း 2004 သွားစိုက်ထူတည်းခိုခဲ့ကြပါပြီ။ ယခုတွင်ငါသည် 37 အသက်အနှစ်ဖြစ်၏။ 2004 မတိုင်မီကငါစိုက်ထူရှိခြင်းနှင့်တစ်ဦးပြဿနာဘယ်တော့မှခဲ့သွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းမရှိပြဿနာနှင့်အတူလိင်များအတွက်စိုက်ထူရလိမ့်မယ်။ ဒီရက်ကျနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 4-5 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်) porn watch ကမှသို့မဟုတ် swinger ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ profile များကိုပေါ်ဓါတ်ပုံတွေကိုမှ masturbate ။ သို့သော်လည်းငါသည်လပ်ချိန်ယူထိုအခါမူကား, နောက်ကျောကသွားကြား၌တစ်ဦးအချိန်တွင် 2-3 နာရီ, အချိန်တစ်နာရီအဘို့ထိုအရပ်၌ငါထိုင်။ Porn Tube လိုင်းများ၏တီထွင်မှုမှာအားလုံးကူညီပေးခဲ့သည်မရှိသေးပေ။
သို့သော် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်ဤပြproblemနာကိုစတင်ခဲ့ချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၅ နှစ်လုံးလုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဖြစ်ဘဲစိုက်ထူခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ တွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်း) ....... သို့သော်ဤအရာသည် ငါသဘောပေါက် AND GENTLEMAN ဤအချက်ကိုအထူးဂရုပြုပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏အိမ်၌ broadband internet ကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတတ်နိုင်သမျှရှာဖွေပြီး၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အွန်လိုင်းမှဓာတ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဒါကငါ့အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ပုံစံအသစ်တစ်ခုပဲ။ အဲဒီမတိုင်ခင်တုန်းကကျွန်တော့်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ကပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုကြည့်ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ်ကေဘယ်လ်ရုပ်ရှင်နဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုကြည့်ရှုဖို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ခဲ့တယ် ရေချိုးခန်းမှပြေးခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ။ ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ the ည့်ခန်းမှာ ၂ မိနစ်လောက်အပျော်ပဲ .......... ဒါပေမယ့် Broadband Internet ကတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပုံစံကိုငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့နောက်ဆုံးတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည်အထိ .. တစ်ကြိမ်၊ ကြိမ် ၄ ကြိမ်၊ တစ်ပတ် ၄ ရက် ၄ ကြိမ်ဖြစ်သည်။ swinger ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ဖြတ်၍၊ profile များမှဓာတ်ပုံများကို ဖြတ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုသန္ဓေတည်စေသည်အထိ…… .. ယောက်ျားများ၊ လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်ကဤတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ငါ့လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်………
ငါဟာဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတယ်၊ အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတယ် ...... လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကငါနဲ့မသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့အဆင်းလှသောအမျိုးသမီးအရေအတွက်ကိုမရေတွက်နိုင်။ နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်သည့်နောက်ဆုံး (၁၀/၂၆/၁၁) …။ ငါသည်ဤကြီးမြတ်သောအာရှမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူမရောက်လာသည်။ ငါနည်းနည်းကြိုးစား။ နေခဲ့သော်လည်း ၅ မိနစ်အတွင်းတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါဒီလိုဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါငါလုပ်လေ့ရှိတယ်၊ ငါခက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမိနစ်အနည်းငယ်ကြာတယ်၊ ပြီးတော့ငါသူမကိုထပ်မံဝင်တဲ့အခါနောက်ဆုံး ၂ မိနစ်လောက်မဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဆေးထိုးအပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူမကကောင်းတယ်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ထို နေ့မှစ၍ စာပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်မသက်ဆိုင်သောပြန်ကြားချက်များမကြာခဏရရှိသည်။ သူမဟာစိတ်ပျက်မိသည်။
နှောင်းပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်၊ သူတို့အားလုံးလုပ်သည်၊ အချို့ကသူတို့ကအမြဲတမ်းလုပ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်လိင်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သူတို့စိုက်ထူရသည့်ပြproblemနာမရှိပါ။ မော်နီတာရှေ့တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ငါ့လိင်ဘဝနှင့်စိုက်ထူနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်။
တစ်နေ့တစ်ကြိမ်၊ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လောက်ပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကတစ်မိနစ် (သို့) နှစ်အချိန်လောက်မှာငါ့ရဲ့လိင်မှုဘ ၀ နဲ့စိုက်ထူခြင်းကိုလုံးဝမထိခိုက်ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ သို့သော်အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကသင့်ကိုများစွာအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် ငါကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ထွက် Dallas ရှိသွားခဲ့သည်။ ကွဲပြားတဲ့ဌာနခွဲကအရောင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်သိတယ်။ ကျနော်တို့ sultry အီးမေးလ်များနှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်ငါကသုံးရက်တိုင် masturbate ခဲ့ပါဘူး။ ငါဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွန်းလွဲပိုင်းပြု။ , ထို့နောက်ငါသူမမြင်လျှင်တိုင်အောင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး စနေနေ့ညမှာသူမရဲ့ဟိုတယ်ကိုငါသွားခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့မိနစ်3အတွင်းအဝတ်အချည်းစည်းခဲ့ကြသည်, ထိုအရာတို့ကို။ သူမသည်ငါ့ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်ခဲယဉ်းတယ်, ဒါပေမယ့်ငါခက်ခဲရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူရှုပ်။ ပြီးတော့သူမကို ၀ င်ရောက်တဲ့အခါ၊ ငါဟာယောက်ျားတွေ၊ ငါကြိုးစားအားထုတ်နေရင်းသူမအားနေရာတစ်နေရာလုံးတွင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာ freaking ခဲ့သည်။ ငါမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကသူမငါ့ကိုထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးတာနဲ့ငါချက်ချင်းပဲလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကအင်တာနက်က porn ကိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်တွန်းအားပေးနေတာကိုသတိပြုမိလိုက်တာကမင်းအတွက်အချိန်တွေများလာစေတယ်။
ပြောတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်, ဤသည်နေ့ရက်မှငါနေဆဲ porn မှ masturbating တယ်, ငါနီးပါး2နာရီနောက်ဆုံးညဥ့်ကကိုပြု၏။ ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီရတဲ့သို့ကြည့်မျှော်တယ်။ ဒါပေမယ့်ယောက်ျားတွေ, သင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုတိုက်ရိုက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မဟုတ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာကိုဖတ်ကြလိမ့်မည်, ထိုစကားမှန်မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လူတွေရှိတယ်အလေ့အထများ masturbating ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုသတ်မှတ်မထားဘူး။ ဒါကကိုလေ့လာမဟုတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၇ နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် Broadband အင်တာနက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိသော ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ အင်တာနက် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းခဲ့ဖူးပြီး၊ ထိုအခါငါကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ပင်တားဆီးမှုကနေလာမယုံ; မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်နေချိန်မှာညစ်ညမ်းတဲ့အရာဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကကျွန်တော့်ရဲ့လိင်တံကိုပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာနှင့်အခြားသူများစွာ၏ပြproblemနာသည်လိင်တံကိုအလွန်အကျွံဆွဲခြင်းနှင့်တင်းမာခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်မယောက်ျားကညစ်ညမ်းရုပ်ကိုစွဲစွဲလမ်းတယ်။ Reddit woudl အများစုက“ လူတိုင်းက porn ကိုကြည့်တာ၊ ဂရုမစိုက်သင့်ဘူး” နဲ့ငါ့ကိုရိုက်တာငါသိတယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်ငရဲ၊ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွကြည့်ရှုခဲ့သည်။ လူအများစုလုပ်ပြီးကြီးမားတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအရမ်းနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မယုံနိုင်ဘူး။
ထိုအခါ ... ပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးပေါ်လာ၏။ ကျမယောက်ျားမှာ ED (၃၀ အရွယ်) မှာ ED ရှိတာကိုသိလာတယ်။ အချိန်အများစုကိုသူမရနိုင်တော့ဘူး။ ငါတို့ရင်းနှီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာမပြီးနိုင်ဘူး။ သူ၏ဘရောင်ဇာသမိုင်းကိုအလျင်အမြန်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေကြောင်း၊ မကြာခဏကျွန်ုပ်တို့သည် living ည့်ခန်းတွင်စကားပြောနေချိန်တွင်သူသည်အဝေးမှထကြည့်ခြင်း၊ ဒီဟာကကြီးမားတဲ့ပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်မိတယ်။ တစ်ခါတလေမှာသူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူကဒီညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုဟာသူ့အရင်အိမ်ထောင်ရေးကိုပျက်ပြားစေကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ငါကသူမကြည့်တာကိုရပ်တန့်ဖို့၊ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့လိင်ဘဝကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့သူ့ကိုတောင်းခဲ့တယ်။ ဒါကစွဲလမ်းမှုမဟုတ်ဘဲငါတို့လိင်ဘဝကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါဒါကိုရှည်အောင်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီဟာကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆက်လုပ်နေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာသူဟာကွန်ပျူတာကိုသူစတင်တီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှာဖို့ကြည့်ခဲ့တယ်။ ဒါက 4th relapse နဲ့တူတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းသည်လူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ငါဝေးပြီးပြည့်စုံတဲ့ fuck ဆိုတဲ့ကနေပါပဲ သူ့ကိုငါတောင်းသမျှတစ်ခုတည်းသောတစ်ခုကသူပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါသူကငါ့ကိုပြောနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါချစ်မြတ်နိုးပြီးပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပြီးပြန်လမ်းပေါ်ပြန်လာနိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုမပြောဘူး ဤသူသည်ငါသူ၏ browser browser သမိုင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရှာဖွေရန်ခဲ့ 4th အချိန်ဖြစ်ပါသည်
ဟုတ်ပါတယ်ငါသူ့ကိုအပေါ်ထွက်ခေါ်တော်မူသောသူသည်အားလုံးတောင်းပန်ပြုမူဆောင်ရွက်နေ သူတကယ်နုတ်ထွက်ချင်သလား၊ သူဆက်လုပ်ချင်ပြီးဖုံးကွယ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာချင်လားဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ သူကဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တယ်၊ အကူအညီလိုတယ်လို့ကျိန်ဆိုတယ်။ သူကသူသွားချင်တယ်လို့ပြောပေမယ့်သူတို့အားလုံးဟာတစ်နာရီကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ + နဲ့အာမခံမယူကြဘူး၊ ငါကကွဲသွားတယ်။ ငါလုံးဝသစ္စာဖောက်ခံစားရ, နာကျင်နှင့်လိမ်ညာ။
ငါအရမ်းထောက်ခံရန်နှင့် bitchy သို့မဟုတ် ultimatums ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့သူသူသည်ငါနှင့်အတူရိုးသားလို့မရပါဘူး? သူကရုန်းကန်နေတာလား၊ ငါ့ကိုလိမ်ပြောနေတာလား၊ သူတကယ်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာသူလုပ်နေတာတွေဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုချီးမွမ်းခွင့်ပေးလိုက်တာကိုငါသူ့ကိုအပတ်စဉ်မေးမြန်းနေတာကိုး။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စကိုထိပါးနေဆဲဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၈ နှစ်အရွယ်အထူးလိုအပ်ချက်များ ရှိ၍ ညဥ့်နက်၌အိပ်မပျော်သေးသော ၇ လအရွယ်ကလေးငယ်ရှိခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုမလိုအပ်ပါ။ ) ။ ငါဘာလုပ်မှာလဲ ငါတကယ်တော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး .... ငါခင်ပွန်းကိုဘာမှမထက်ပိုပြီးချစ်ပြီးငါကူညီချင်တယ်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်က rebooting လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အောင်မြင်မှုနှင့်အရှည်ကွဲပြားမှုတွေရှိခဲ့ရင်ဒီအချိန်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တကယ်ကူညီနိုင်ဖို့ဒီနေရာကို post ထားတာကောင်းပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံး P (၂ လလောက်) ကိုပြေးပြီးတဲ့အခါမှာငါဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အရသာကိုသေချာပေါက်ရခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်၊ ဘဝကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းလာပြီး၊ ငါနဲ့မိန်းကလေးတွေကြားမှာသဘာဝဆွဲဆောင်မှုတွေကတစ်နေ့မှာငါဟာတကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပေါင်းပင်တွေအများကြီးဆေးလိပ်ဖြတ်နေတယ်။ ငါသွားယုန်အပေါက်ကိုဆင်း။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားမှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြင်းထန်သောစိတ်ပျက်ဖွယ်လက္ခဏာများနှင့်အတူတစ်ပါတ်အကြာတွင်အတော်လေးစိတ်ချမ်းသာရပါသည်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်အကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုလမ်းတစ်လျှောက်ဖတ်နိုင်ပြီး၎င်းနှင့်ကပ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုသတိပေးရန်ပြန်သွားနိုင်သည်။ ငါ့အတွက်အဆိုးရွားဆုံးအပိုင်းကပြန်ဖွင့်နေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံပေါ်နေတဲ့ libido ကျဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ လူတိုင်းကဒါကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့လိင်မှုဟာငါ့ကိုယ်ခန္ဓာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုမှဖြတ်တောက်ခံရသလိုခံစားရတယ်…
ဒီတော့နောက်ခံအနည်းငယ်အတွက်၊ အခု ၂၄ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါအရမ်းငယ်ငယ်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာ၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တာစခဲ့တယ်။ (၁၀ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်) တောင်မှငါ့မိသားစုကပထမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်အိုင်အိုဝါရှိမြို့ငယ်လေးများအနက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရရှိရန်…စည်ကားသည်တိုးတက်မှု! အရမ်းရယ်ရတယ်ဒါနဲ့အလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတုန်းကငါမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့တယ်။ ၆ တန်းခန့်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုပထမဆုံးတင်ခဲ့သည်။ ဦး စွာ ADHD အတွက်၊ ခဏအကြာတွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါတို့အတွက်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အထက်တန်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်သောက်ခဲ့သောစိတ်ကြွစိတ်ကြွဆေးများနှင့်အိပ်ဆေးအထောက်အပံ့များကိုပေးခဲ့သည်။ ဒီလက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတာက PMO အလွန်အကျွံ PMO ပြန်ကြည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။ ငါအကြီးတန်းနှစ်တွင်ပေါင်းပင်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခဲ့ပြီးငါဆေးလိပ်ဖြတ်သည့်လွန်ခဲ့သော ၅ လခန့်အထိဆေးလိပ်သောက်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်သောအောင်မြင်မှုမတိုင်မီပေါင်းပင်မှဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်၎င်းသည်ပေါင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်နည်းခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောစိုက်ထူမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ) ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းတဲ့ ED ရောဂါအကြောင်းဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်မဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ဖတ်တာနဲ့တူတယ်၊ မင်းတို့ယောက်ျားတွေမှာအတွေ့အကြုံ၊ ငါတို့ပုံပြင်တွေအားလုံးကြားမှာတူညီတာတွေအတူတူပဲဆိုတာသေချာတယ်။
ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်လအနည်းငယ်အကြာမှာမိန်းကလေးနဲ့အငြင်းပွားခဲ့တယ်။ လိင်မှုကိစ္စအများစုဟာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မကြာခဏဆိုသလိုငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်၊ မပျောက်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါစိတ်မပျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအော်ဂဇင်ကိုပုံသွင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာမိန်းကလေးစုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့တယ်၊ များသောအားဖြင့်လိင်ကကောင်းတယ်၊ တခါတလေတကယ်ကောင်းတယ် (အထူးသဖြင့်ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာပျက်သွားရင်မိုက်မဲတယ်၊ ဆက်သွယ်မှုမလုပ်ဘူး) ။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ကျွန်တော်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတယ်၊ ​​ဒါကဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကကျွန်တော့်ကိုမလုံခြုံမှုများစွာပေးခဲ့တယ်။
ငါနှင့်အတူရှိနေသောနောက်ဆုံးမိန်းကလေးစုံတွဲသည်လိင်ကိုယခုပင်စုပ်ယူလိုက်ပြီ။ ဆက်ဆံရေးသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့။ ကျွန်ုပ်ပိုကောင်းရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော့်ကိုတကယ်စိတ်ပူစေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျနော့်ဒစ်ကိုတကယ့်ကိုရိုက်နှက်နေပုံရတယ်၊ ဆိုလိုတာကငါကိုင်တွယ်ကိုင်တွယ်ပြီးပြီ။ ငါကတစ်နေ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်းမှသည်၊ PE (လိင်တံကို) လုပ်ခြင်းအထိ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါရှိနေတဲ့ပြhelpနာတွေကိုသူတို့ကူညီလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်အဖြစ်များတတ်သည် (အားနည်းခြင်းမရှိ) နှင့်သွေးကြောများကဲ့သို့သောအရာများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံနာကျင်သောစိုက်ထူမှုများရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကုစားရန်အခွင့်အရေးပေးသောအခါများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ရှည်လျားစွာသွားပါကပြeနာများစွာသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်၊ ငါ၏စိုက်ထူမှုများသည်ပိုမိုအားကောင်းလာလိမ့်မည်၊ သို့သော်တီးဝိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုနီးပါးရှိပုံရသည်။ အရေပြားအောက်ကကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းဒေသရှိinflရိယာအားလုံးသို့မဖောင်းပွစေရန်တားဆီးပေးသည်။ မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါအာရုံကြောများမပါသည့်ခြေထောက်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိသူမ၏လိင်အင်္ဂါကိုမခံစားနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်သည် တစ်ခုခုလား ငါဒါကိုအရမ်းစိုးရိမ်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင်ပြင်ဆင်ချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီး၊ အသက် ၂၄ နှစ်မှစ၍ ဤပြwithနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရသည်။ အခြေအနေတစ်ခုသည်အရောင်များကိုပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြသည့်အခါရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင်တို့အားတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်စိန်ခေါ်သည်။ သင်တို့ထဲမှများစွာသောသူက“ ငါဒီလူနဲ့အတူနေခဲ့တုန်းကငါမဖျောက်နိုင်ခဲ့” လို့ပြောဖို့သွေးဆောင်ခံရလိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာကြည့်လျှင်အခြေအနေသည်ထိုထက်စော။ လမ်းစတင်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ငါ ED နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းနှင့်အတူနုပျိုကဲ့သို့အဘယ်အရာကိုအများဆုံးထက်ပိုကောင်းတဲ့နားလည်ပါတယ်။ ငါ၏“ အသိအမှတ်ပြုအဆင့်” အပြီးတွင်ကမ္ဘာကြီး၏အလေးချိန်သည်သင့်အပေါ်သို့ကျဆင်းသွားပြီးသင် bug တစ်ခုကဲ့သို့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသည်။ သင်သိလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ အပြုသဘောဆောင်သောအတွေးဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာသဘာဝနည်းလမ်းမှာအွန်လိုင်းဖတ်ခြင်းနှင့် ED နှင့်ပတ်သက်သည့်သင်တတ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည် (အကြောင်းရင်းများ၊ ဖြစ်နိုင်သည့်ကုသမှုများစသည်) ။ ထို့နောက်ငါအထွေထွေယောဂီအများအပြားသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့ကဒီအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မသိဘဲဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သူတို့၏ဗဟုသုတမှာအကန့်အသတ် ရှိ၍ သူတို့၏ Cialis၊ Levitra နှင့် Viagra ကိုယ်စားလှယ်များမှသူတို့အနည်းဆုံးပြောရန်ဘက်လိုက်မှုကသူတို့ကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်ကိုသာသိသည်။ ငါဆေးလုံးကိုသောက်လိုက်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်တူညီသောပြproblemနာရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်အဖြေတစ်ခုမရရှိနိုင်သည့်အတွက်အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ပူပန်လာသည်။ ငါ့ကို -“ ဘယ်တော့မှအဖြေမယူနဲ့” ဆိုတဲ့ခေါင်းမာတဲ့သားဖြစ်သူ - ငါဟာအဲဒီ့ခြေလှမ်းကိုလှမ်းပြီးငါ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအပြည့်အဝလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သွေးစစ်ဆေးခြင်း (testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ၊ ကိုလက်စထရော၊ ဟော်မုန်းများစသည်) ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တင်ပါးဆုံတွင်းရှိ Cat-Scan အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သွေးစီးဆင်းမှုသည်ပုံမှန်နှင့်လုံလောက်မှုရှိကြောင်းသေချာစေသည်။ ကျွန်တော့်လိင်တံမှာဆီးချိုရောဂါအထူးကုဆရာဝန်လုပ်ပြီး Doppler Testing လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ဒီစာအုပ်မှာရှိတဲ့သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်အားလုံးကိုယူခဲ့တယ်။ ရလဒ်ကဘာလဲဆိုတာခန့်မှန်း ?? ....... ကျန်းမာရေးနှင့်ဒဏ်ငွေ !!
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်နောက်ယုတ္တိရှိသည့်ခြေလှမ်းကိုလှမ်းလိုက်သည်။ ငါ Dartmouth မှဆရာဝန်နှင့်သုံးလကြာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Pysch အကဲဖြတ်မှုဟာခက်ခဲတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဘယ်တော့ပြီးသွားပြီဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမသိဘူး၊ မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်ပိုက်ဆံကုန်သွားပြီးအကဲဖြတ်မှုကိုရပ်ပစ်လိုက်ရတယ်။ ယခုတစ်နှစ်အကြာ .. ပြီးတော့ငါအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတုန်းပဲ။
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို ... ... "မင်းရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုငါခံစားရတယ်" ED ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပြissueနာတစ်ခုမှာသင်ဤအရာကိုသင်တွေ့ကြုံဖူးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်၎င်းကိုခဏတဖြုတ်မှတ်မိရန်ရည်ရွယ်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လိင်မှုကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခါမင်းစိတ်ထဲအတိတ်ထဲသို့ပြန်ဝင်သွားပြီးယခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသတိရနေသည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သောစိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသင်၏လိင်တံရှိသင်၏ Corpus ကြွက်သားများကိုသွေးစီးဆင်းမှုကိုကန့်သတ်ပေးပြီးသင်၏ခေါက်ဆွဲအားအားလျော့စေသည်။
သတင်းကောင်း။ ငါအလုပ်အသစ်ကိုစလုပ်ပြီ။ နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီကိစ္စကိုအာရုံမစိုက်ဖို့ကျွန်တော့်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုမင်းမျိုးပွားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲယောက်ျားတစ်ယောက်အဖြစ်သာမကလူသားတစ် ဦး အဖြစ်ပါခံစားနိုင်ပါတယ်။ (အလားတူအမျိုးသမီးပြhaveနာများရှိတဲ့အမျိုးသမီးများလည်းအလားတူခံစားရတယ်) ။ ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးကိုအဓိကထားခြင်းနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုများကိုလျော့နည်းစေသောဤဖြစ်စဉ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုကို ထပ်မံ၍ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့မဟုတ်ပေမယ့်အတော်လေးတိုးတက်ပါပြီ ဒီပိုစတာတွေလိုပဲငါဟာ ၁၂-၁၃ နှစ်လုံးလုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့ဖူးပြီးချန်ပီယံလိဂ်လိုပဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့တယ်။ နောက်အဆင့်ကတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်ပြီးငါ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်လိုပြန်လည်သက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ပါ။
သင်၏ရေးသားချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အကယ်၍ သင်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသို့ ဆက်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါကသင်၏ရက်များကိုမဖြုန်းတီးပါကငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိလိမ့်မည်။ သတိရ…။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခန္ဓာကိုယ်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောစိတ်၊ ကွန်ဒုံးရှိသည့်အမျိုးသမီးတွင်… ၅-၆ လ။ ဒါကြောင့်အဲဒီစာဖတ်သူတွေအားလုံးကိုငါလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပါ။
အသက် ၂၀ အရွယ်ကျွန်မဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကာလမဟုတ်ပါလား
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာမိန်းကလေးအနည်းငယ်နှင့်တစ်ည၊ နှစ်ညအိပ်ရပ်များရှိသည်။ သို့သျောလညျး, လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကျော်ငါ့အထိတ်လန့် ED ကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်အောင်မြင်သောစံ PIV အတွေ့အကြုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး မဟုတ်ရင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဆက်ဆံရေးကိုရှောင်ရှားရန်ဆင်ခြေ ပေး၍ ကျွန်ုပ်အားလမ်းပြရန် ED ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတခါတရံလိင်တူချင်းချစ်တာကိုစိုးရိမ်မိနေတုန်းပဲ။ ငါကယောက်ျားတွေကိုဒါကိုဘယ်တုန်းကမှမထိတ်လန့်ခဲ့ဖူးဘူး။ ယောက်ျားတွေ irl ကိုဖြစ်စေ၊ porn မှာကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလည်းမိန်းကလေး irl ကိုမကြည့်ချင်ဘူး။ ငါလည်းတစ်ခါမှမသေချာဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ဘာသာရေးနောက်ခံကြောင့်အခြားယောက်ျားသူငယ်ချင်းများနှင့်မတူဘဲပုံမှန် porn ကိုကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်ကြည့်ရှုရန်အမြဲတမ်းကြောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အစွန်းရောက်စာဖတ်သူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဒေသခံစာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များအားလုံးကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကငါ့အတွက်ပိုပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေထဲမှာ hypnosis ရှိသူတွေပါ။ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်တုန်းက Sarafina လို့ခေါ်တဲ့ hypnosis အကြောင်း erotica အပိုင်းအစတစ်ခုကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ သေချာတာကငါဟာတစ်နေရာရာမှာရှိနေသေးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဘဲလာဖို့တကယ်သတိရမိတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ငါဟာထူးဆန်းသောစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့၊ mcstories.com နဲ့ Mountainman hypnosis (မိန်းကလေးတွေညှို့ညှပ်ညှပ်ညှပ်နှိပ်စက်ခံရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ) စတဲ့အရာတွေကိုပုံမှန်စတင်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငါဟာမိန်းကလေး ၂ ယောက်သုံးခုထက်ပိုပြီးဘာမှမလုပ်နိူင်တော့သူတို့အားလုံးဟာထူးခြားဆန်းပြားနေခဲ့ရတယ် [ငါအမြဲတမ်းထူးခြားဆန်းပြားအချက်တစ်ခုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ငါထူးခြားဆန်းပြားမိန်းကလေးများ irl ပိုနှစ်သက်ပေမယ့်] ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သူအဖြစ်တွေ့ရပြီးအထီးအပြာအပြာစာပေရုပ်ပုံကိုဖတ်ခဲသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတွေ့သောဆဲဆဲ / ဘဏ္exploာရေးအမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်၎င်းသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးများ ဦး ဆောင်သောအတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရခြင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ပျင်းရိသည်။ ရှာဖွေလိုသူမည်သူမဆိုမိမိကိုယ်ကို A. ငွေကြေးမှမဟုတ်သို့မဟုတ်ခအဖြစ်အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်မိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ဆိုင်သည့်တက္ကသိုလ်ပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ပညာရှင်များကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ရောင်ပြန်ဟပ်ရန်နှင့်အနားယူရန်တစ်နှစ်ယူခဲ့ပြီး၊ ငါအလှည့်အချက်နှစ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးလိင်မကောင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီးနောက်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကကျွန်တော့်ရဲ့“ အိပ်မက်” မိန်းကလေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ကွန်ဒုံးနဲ့ကျွန်တော်မပြီးနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့လူမှုရေးဘဝမှာမသန်မစွမ်းဖြစ်ခဲ့ရသလိုမျိုးယခုသူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူခံစားခဲ့ရသည့်အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့နေသည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်တွင်ခဏတာမကျေနပ်ဖွယ်လိင်ဆက်ဆံမှုများ (ငါပြီးမြောက်နိုင်သည့်တစ်ညအိပ်မက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခု)၊ ငါအရမ်းကြောက်သောမိတ်ကပ်ပုံများ / အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်မလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအရှိန်မြှင့်တက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နှင့်ကတက်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး။
ဒုတိယကတော့ကောလိပ်မှာရှိတဲ့ Sophomore နှစ်မှာ Adderall ဒါမှမဟုတ် Modafinil ကိုသုံးလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ dopamine တိုးမြှင့်ဆေးများကိုသောက်သည့်အခါတိုင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောနေရာများတွင် (မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမရှိခဲ့ပါက) တောင်မှ၎င်းကိုရှူရှိုက်မိသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒအရဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုသိပေမယ့်ကျွန်တော်မရပ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒီဟာကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်လို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ လူအများကြားတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်၏ဆယ်ကျော်သက်မိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည့်နေရာ၌ကျွန်ုပ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်နှိုင်းယှဉ်နေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါတတ်ကျွမ်းခဲ့သော (သို့) အလားအလာရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်အများစုကိုပိတ်ဆို့ခဲ့သည် (mcstories.com, rcwrites.com, xvideos.com, pornhub.com နှင့်ထိပ်ဆုံး porn catalog ၁၀၀ နှင့်မည်သည့်ဘလော့ဂ်များမဆို) ငါအလားအလာနှိုးဆော်ခြင်းကိုရှာဖွေအံ့သောငှါ။ ငါသည်လည်းလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုဖယ်ရှားပစ်ဘူး။ ငါသွားခဲ့တဲ့အရှည်ဆုံးက ၂၁ ရက်ပါ။ အသက် ၃၀ ရောက်ချင်တယ်။ ငါအိပ်မက်တောင်မမက်ဖူးဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိထားသလောက် - ငါကဖယ်ထုတ်ပြီးကတည်းကငါသိတဲ့မထိုက်မတန်မိန်းကလေးတွေနဲ့ vanilla လိင်အကြောင်းပိုစပြီးအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည် (အနည်းငယ်) ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများမှခွဲခြားခြင်းသို့ကူးပြောင်းလေ့ရှိသည် (သို့) အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး (ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ချုပ်တည်းခြင်း၊ hypnotizing / fucking) အကြောင်းအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအချိန်ပြည့်အလုပ်များနေပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာပြားနေလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Flatlining ကအရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။ ငါကရက် ၃၀ ရောက်ရင်ငါယုံကြည်တယ်။ အချို့သောအစစ်အမှန်တိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်သိမ်းခြင်း (ပစ္စည်းအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခြင်းရှိသော်လည်းအရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ ဦး တည်စေသည့်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း) နှင့်ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းကမိန်းကလေးများနှင့်ပိုမိုကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံများစွာရရှိစေပါသည်။ [လူတို့နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံမှုများ - အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်] နှင့်အရာများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်စွမ်းအင်များစွာရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်မှုစက်ဖြစ်လာပြီး Da Vinci လိုခံစားရတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်တစ်ဒါဇင်လောက်သွင်းပြီးမနက်ဖြန်မှာရက်စွဲတစ်ခုရတယ်။ တက္ကသိုလ်ကအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်၊ ငါကတက္ကသိုလ်တက်ပြီးသူမဟာဘွဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ အနည်းဆုံးသူမကိုအိမ်သို့ခေါ်ထုတ်သွားပြီးအနည်းဆုံးညမထွက်ခွာလျှင်သူမပြန်ခေါ်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်တော်စိတ်ပျက်မိပါတယ်
ဒီနေ့မှာငါဟာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒီ hypnosis + lesbians စိတ်ကူးယဉ်ပုံတစ်ပုံကိုပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိမိဘဲနီးကပ်လာခြင်း (နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေဖြတ်ခြင်းတစ်ချောင်းနဲ့လာခဲ့တာ) ။ ငါဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော်တော်လေးလူသိများတယ်ထင်တယ်၊ မင်းကစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုမသတ်မိရင်မင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမသတ်ရင်တောင်မိန်းကလေးတွေနဲ့ထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ငါဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးအများစုသည်ကြီးမားသောလုံခြုံစိတ်ချရသောအမျိုးသားများကိုချစ်ကြသည် (အဖြစ်အပျက်များကဲ့သို့ခြွင်းချက်များစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်စာရင်းဇယားများဖြစ်သည်) ဟုလူသိများသောကြောင့်လည်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ] နှင့်ငါ့ကပ်ပါးကောင်စိတ်ကူးယဉ်ဘဝကိုလျော့ချခြင်းကကျွန်ုပ်အားထိုစံနမူနာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ကျွန်ုပ်အားပုံသွင်းပေးသင့်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ဟာ Adderall နဲ့ Modafinil မပါဘဲသွားခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါဟာမျှတတဲ့ကုန်သွယ်ရေးပါ။ ပြည်နယ်အပေါ်မှီခိုမှု + သည်းခံစိတ်မြန်ဆန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ဤဆေးများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အသေးစားပညာရေးတိုးတက်မှု၏အကျိုးစီးပွားကိုဆိုလိုသည်။ ငါသည်လည်းပိတ်ဆို့ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းတွင်ပြproblemsနာများမရှိခဲ့ပါ။
ငါဂျာနယ်စဖွင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတက္ကသိုလ်ပြန်တက်တဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြားလာပြီးမိန်းကလေးတွေပိုများလာလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကမိန်းကလေးတွေပေးတဲ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ခ။ စိတ်ဖိစီးမှုကငါ့ကိုလုပ်ဖို့ပိုလွယ်ကူစေတယ်။ (ဖတ်ပါ - လူရှုပ်က) ငါ့ကိုလွမ်းလို့မရဘူး။ ဒီမှာမထိုက်မတန်မိန်းကလေးများပေးနိုငျသောအတွေ့အကြုံများကိုထွက်။ ငါပုံမှန် vanilla လိင်ဆက်ဆံမတိုင်မီ ဦး နှောက်ပြုပြင်မွမ်းမံနည်းပညာများထွက်လာရန်အဘို့အနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်စောင့်ဆိုင်းချင်ကြဘူး။
ဒီအတိတ်သီတင်းပတ်ကည ၂ နာရီလောက်မှာကျွန်မရဲ့အိမ်ဖော်သူငယ်ချင်းကကျွန်မကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးနေတယ်။ သူမကလာလည်ပြီးလှည့်စားလိုသောအတန်းတွင် ၂ ညအိပ်ခဲ့ရသည်။ နှင့်အညီ,2ညတတန်းအတွက်အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ဆင်း။ အနည်းငယ်ရှက်စရာ။ ငါ့ ဦး နှောက်သည်ငါးဖမ်းပိုက်များနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်များတွင်ထိပ်တန်းနိုင်ဖိုကိုကျော်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ သူမကနောက်တစ်နေ့မနက်မှာထွက်သွားတော့ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်နေတယ်။ ငါပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာပဲ ငါ ၈ နှစ်အရွယ်ကတည်းက (၂၂ နှစ်ပဲရှိသေးသည်) ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့ရှာဖွေကြည့်ပြီးအမှားတွေလုပ်မိခဲ့တယ်။ တဖန်ငါစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့ဘယ်လိုငါ၏အဒစ်သင်ပေးဖို့ရှိသည်ပါဘဲ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော့်ဘဝမှာရှုပ်ပွနေအောင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီး“ ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝ” ကိုနေထိုင်ဖို့အရာရာကိုရိုးရှင်းအောင်ကြိုးစားနေတယ်။ ၎င်းအတွေးအခေါ်တစ်ခုလုံးသို့မသွားနိုင်ပါ။ (တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားအလိုမရှိလျှင်၊ ယခု ပို၍ ထင်သာမြင်သာရှိရန်ကြိုးစားနေသည်) မဟုတ်သော်လည်းလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ် (ish) တွင်ကျွန်ုပ်အဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့သည်။ ဘိုးဘွားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏လူနေမှုဘ ၀ ပုံစံအတိုင်းနေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ဦး နှောက်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀,၀၀၀ လုံးလုံးပြောင်းလဲမှုမရှိသလောက်နည်းသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ယခုအထိလုပ်ခဲ့သောအရာများသည်စာရင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်သော်လည်း၊
ယင်းစစ်သည်တော်အစားအစာ (တဦးတည်းမုန့်ညက်အများအားဖြင့်လုံးဝလတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုတစ်နေ့က) -Start
အဘယ်သူမျှမစက်တွေ (ပြင်ပ cardio နှင့် frteeweights သာ) နှင့်အတူ -Exercise
-No Facebook Twitter စသည်တို့ကို (လက်ရှိဒီငါပိုက်ကွန်အပေါ်ပို့စ်တင်ပါ၏တစ်ခုတည်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်)
- ကျွန်ုပ်၏အရာများစွာကိုထုတ်ယူပြီးဗီရိုကိုအကြီးအကျယ်ခုတ်လှဲပါ (လက်ရှိကျွန်ုပ်အခန်းအတွင်းရှိအရာအားလုံးမှာအိပ်ရာ၊ အဝတ်၊ လက်ပ်တော့နှင့်မှတ်တမ်းစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
- ဆေးပြင်းလိပ်များ၊ ပေါင်းပင်များနှင့်ကိုကာကိုလာများပေးခြင်း (မှန်ကန်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်နောက်တဖန်ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲအပတ်စဉ်မဟုတ်ဘဲ)
ဤရွေ့ကားအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်နှင့်တူတချို့ကအမှုအရာ, ငါမှာပြန်စကိုယ့်ကိုယ်ကို plugging မတိုင်မီ (သင်စနစ်တကျသင်၌မှီဝဲကြသည်ဝင်္ကြည့်ရှုရန်စနစ်အထဲကကိုယ့်ကိုယ်ယူရှိသည်) ငါ့အသက်ကိုကြောင့်မပါဘဲကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုမြင်ရန်, တစ်လအရှုံးမပေး အများကြီးအသုံးပြုမှုလျော့နည်းသည်။
ကျွန်မအင်တာနက်ကိုပြုသကဲ့သို့, အလားတူအမှုကိုပြုဘဝကမပါဘဲနှင့်တူ၏အဘယ်အရာကိုမြင်ပြီးတော့လတစ်လရဲ့အဆုံးမှာဆုံးဖြတ်ချက်စေမယ့်ခဲ့သည်။ ငါမပါဘဲပိုပြီးမကြာခဏငါချင်ပါတယ်ပေါ်ထွန်းခဲ့သော DE ၏ရံဖန်ရံခါအမှု (ဟောင်းတစ်ဦး 21 တစ်နှစ်ပုံမှန်မဟုတ်) ကနေ, ကယ့်ကိုငါအများကြီး P ကို ​​related ကိစ္စများရှိခဲ့ထင်မေ့သွားရော, ဒါကြောင့်ငါကအက်ကွဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
စတစ်ပါတ်အကြောင်းငါ Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်ပေါ်သို့လဲ, ပြီးတော့ငါသဘောပေါက်ပိုပြီး P ကို ​​related ပြဿနာများရှိစေခြင်းငှါ, စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ကိုသငျတို့ယောက်ျားတွေအကြောင်းကိုသိကြသမျှသောပစ္စည်းပစ္စယသာသက်ရောက်မယ့်ပုံကိုအလေးအနက်ဘယ်အရာကမှ။ ငါသည်ဤဖို့ပိုရှိပါတယ်ဖြစ်အံ့သောငှါဆုံးဖြတ်သောအခါဒါကြောင့်ထို့နောက်ရိုးရှင်းသောငါလုပ်ပေးသွားခဲ့ပါသည်တစ်လချဉ်းကပ်ဘို့အ P ကိုအရှုံးမပေး။ ဒါနဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးက M ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ပါတ်အကြာဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုသည်ယနေ့နှင့်ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏။ ငါဘယ်မှာသွားရှာကြသလော ငါသည်အဘယ်သို့ကျင့်ကိုကျင့်သလော မပြောတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်လာမယ့်သီတင်းပတ်ကျော်ကကျွန်မအနေနဲ့အမှန်တကယ်ရည်မှန်းချက် / အချိန်ဇယားမသတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်ထင်သည်။ ဤသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သောအရာကိုဖြစ်လိမ့်မည်: http://www.yourbrainrebalanced.com/index.php?topic=1995.0
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ငါလိင်ဆက်ဆံရန်ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်ကြိမ်ငါစိုက်ထူမရနိုင်ဘူး, တစ်ချိန်ကမူးမူးတ ဦး တည်းအရက်မူးခဲ့သည်။ ထို့နောက်နောက်မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်သုံးညအိပ်ရပ်ကွက်တွင်ရပ်တည်နေသည်။ တစ်ခုတည်းသောတိုးတက်မှုသည်ဝက် ၀ တ်စုံထူထူကိုရရှိရန်နှင့်မသွားမီခဏသာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အိပ်မက်၏အမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ အတ္တစိတ်နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သေပြီးသောသူသေပြီ။ ငါသူမ၏နောက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမအားပြောပြပြီးသူမကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဖြစ်မည်ဟု ဦး ဇော်လင်းကပြောခဲ့သည်။ အခြားမိန်းကလေးနှင့်မတူဘဲဤမိန်းကလေးနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ သူမလည်းလှပသည်၊ ကျွန်ုပ်၏လိဂ်မှပင် ... သို့သော်အခြားညတွင်လုံလုံလောက်လောက်ပင်သေချာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မထနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဝတ်အစားများစထွက်လာချိန် မှစ၍ သူမပတ်ပတ်လည်တွင်ဆုပ်ကိုင်လိုက်သောအခါပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လျောက်ပတ်သောဆံပင်ကိုရနိုင်ခဲ့သည် , ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူကပဲ wimped နှင့်ထွက်သွား ...
ငါ ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ အင်တာနက် porn ကိုကြည့်ခဲ့ပြီ၊ ယခုအသက် ၂၂ နှစ်၊ အင်တာနက် porn စွဲလမ်းမှုသည်ဆိုးရွားသည့်အချိန်များရှိခဲ့ဖူးသော်လည်းပုံမှန်ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုပိုမိုငြိမ်သက်အောင်ပြုလုပ်ရန်အမြဲတစေညည်းတွားမြည်တမ်းခဲ့သည်။ တစ်ခါတလေနေ့စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာ၊ ကြိမ်ဖန်များစွာလုပ်တတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့နောက်တခါတော့ porn ဒါမှမဟုတ် masturbation မပါပဲအခြားအချိန်တွေမှာရက်အနည်းငယ်လောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာငါသွားလေ့ရှိတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိန်းကလေးဟာတကယ်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးနားလည်မှုလည်းရှိတယ်။ ငါ့ရဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမရှိတော့တဲ့အခါမှာငါဆရာဝန်နဲ့သွားတွေ့မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကညစ်ညမ်းစေတဲ့စိတ်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအဲဒီညမှာပဲငါ ' ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ။
ငါ 11 အကြောင်းကိုအခါ masturbating စတင်ခဲ့သည်။ ငါပြုလေ့ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်မိပေမယ့်တစ်နှစ်အကြာမှာသူက“ ပုံမှန်စတိုင်လ်” လို့ပြောင်းလိုက်တယ်။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကဝတ်လစ်စလစ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုမိန်းကလေးတွေနဲ့ကာတွန်းကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာသူငယ်ချင်းတယောက်ကနေရရှိခဲ့တဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့မဂ္ဂဇင်းတချို့ဆီကိုအရှိန်မြင့်လာတယ်။ အရူးတစ် ဦး ကဲ့သို့ horny တယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါလူကြိုက်များတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးတွေကငါကြည့်ကောင်းနေတယ်လို့မကြာခဏပြောတတ်တယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကမိန်းကလေးတွေကြားမှာအမြဲတမ်းရှက်တတ်ခဲ့ပေမယ့်အသက် ၁၆ နှစ်လောက်အရက်သောက်တဲ့အခါငါဟာမိန်းကလေးတော်တော်များများနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်လိင်မပါဘူး။ ငါအသက် ၁၈ နှစ်မှာငါအတန်းကနေမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ နှင့်အတူမေတ္တာ၌ပေမယ့်ဆိုးဆိုးရွားရွားအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါတို့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ငါမထနိုင်ခဲ့လို့ငါထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ သူမကသူမရဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုပြောခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေအကုန်မှာကျောင်းတစ်ခုလုံးကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသိတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အရှုပ်အထွေးဆုံးအဖြစ်အပျက်ပါ။ အဲဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာတခြားလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာရိုးရိုးသားသားယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုယ့်စစ်တပ်အတွက်အခါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ငါ့ကိုထက်နည်းနည်းအသက်ငယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကျနော်တို့နီးပါး4နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မကိုယ်တစ်ဦး Viagra ဆေးလုံးကိုယူဖူးသော်လည်း ED ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ သူမတကယ်နဲ့ကြင်ကြင်နာနာပြောပြီးအရေးမကြီးဟုပြောခဲ့သည်။ သူနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားမိန်းကလေးအကြောင်းဇာတ်လမ်းကိုထိန်းကျောင်းခဲ့ရသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံး၌ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည် ။ သူမသည်အလွန်အံ့အားသင့်သွားပြီးကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမသုံးရန်ပြောခဲ့သည်။ သူမအနေနဲ့ငါနုတ်ထွက်သည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာအင်တာနက်မရှိဘူး၊ ငါအဲဒီမှာရှိတုန်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအိမ်ကိုမကြာခဏသွားလေ့ရှိပြီးနာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ခံစားမှု၊ ရက်ပေါင်းများစွာအဘို့။ ကျွန်ုပ်၏ libido သည်အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ချိန်က (ရိုင်ဖယ်ဟောင်းကဲ့သို့) အော်ဂဇင်ကိုသာပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ ၂၄ နာရီအကြာတွင်ကျွန်ုပ်ပြန်သွားနိုင်သည်။
၄ နှစ်နီးပါးပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကကျွန်မရဲ့အခြေအနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး (ကျွန်မရဲ့အခြေအနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး) ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကအရှိန်မြှင့်လာပါပြီ။ ငါ Yourbrainonporn ဆိုဒ်ကိုဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာရှာတွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်၊ အားလုံးအဓိပ္ပာယ်ရှိခဲ့တယ်။ ငါအအေးကြက်ဆင်ကိုဖြတ်ပြီးကတည်းက porn ကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ်။ ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနှိပ်ခံချင်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တွင် MO နှစ်ကြိမ်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မကူညီနိူင်ခဲ့ပါ။ O. ကိုရခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်အော်ဂဇင်ရပြီးကတည်းက ၃ ပတ်ကျော်သွားပြီး၊ ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံး၊ ငါထပ်လုပ်တယ်
တိုးတက်မှုများ - လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုမိုရရှိခြင်း (ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကအလုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင်လုံးဝတုန်လှုပ်သွားခဲ့သည်။ 😁ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံကိုသာထိခြင်းဖြင့်စိုက်ထူခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။ မနက်ခင်းတွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုသာတွေး။ တွေးတောခြင်းမရှိဘဲစိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်ငါ၌အလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုမရှိသဖြင့်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပြီးကျွန်ုပ်၏နံနက်စိုက်ထူမှုသည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ငါမကြာသေးမီက flatline nr သို့ရောက်သည်ဟုသံသယရှိသည်။ ၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိမိပါကဤရက်သတ္တပတ်များအတွင်းလိင်စိတ်လုံးဝမခံစားရဟုခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်မှာ ၉၉% သော prostatitis ရှိနေတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမခံရဘဲများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ငါသုတ်ရည်ထဲမှာသွေးရခဲ့ဖူးတယ်။ ငါ O မှာနောက်ဆုံးအကြိမ်ကျရင်လုံးဝအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှ poop လုပ်ရမယ်။
ပန်းတိုင် - ငါပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။ အသက် ၂၄ နှစ်သာရှိသေးတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ ငါတစ်ညရပ်တည်မှုချင်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဒီအဘို့ရပ်တန့်နေသည်ထင်ပါတယ်
ကောင်းပြီဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။ အကြံပေးချက်အချို့ကိုနှစ်သက်ပါမည် my ကျွန်ုပ်၏အင်္ဂလိပ်သည်အလွန်ဆိုးသည်ကိုဝမ်းနည်းပါသည်
ဟုတ်တယ်၊ ငါ porn ကိုကြည့်ပြီးအဆုံးမဲ့အမျိုးအစားကိုသာကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်တဲ့အခါငါကောင်းတဲ့စိုက်ထူမှုကိုရနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါချစ်တဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ငါတဝက်တည့်တည့်မှာမှပျောက်သွားနိုင်တယ် ... ငါ ' အဖြစ်အပျက်၏နံနက် မှစ၍,4ရက်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။
ကိုယ်အကြောင်းကိုတစ်ဦးကနည်းနည်း: im 23 အသက်ဈ porn-သွေးဆောင် ED ကနေခံစားနေကြရသည်။ ငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှစပြီးငါ့အတန်းထဲမှမိန်းကလေးအများစုနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအမျိုးသမီးအဆိုတော်များ / ဂီတသမားများ (Beyonce shakira စသည်) နှင့် porn သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့ကို ၁ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်လောက်အများအားဖြင့် fap လုပ်လေ့ရှိပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုနာရီအနည်းငယ် (သို့) ဒီထက်ပိုကြာတဲ့အထိခံစားရတယ်။ အိမ်သာဆိုင်တွေမှာအလုပ်လုပ်နေတာတောင်ဟားဟား။ အစဉ်အမြဲငါသံသယရှိမိသည်ကငါ့အတွက်မကောင်းဘူး၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် - ငါအရှည်ဆုံး ၅ ပတ်ပဲ၊ နောက်ဆုံးငါကညစ်ပတ်ပေမဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ် ငါဘယ်တော့မှ hardcore ဘာမှမြင့်တက်ခဲ့သည်။
ငါအသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်မှာအပျိုစင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပါတီပွဲမှာကျပန်းကူခြင်းနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ် - ငါအရမ်းမူးနေတယ်။ ငါမလာနိုင်တော့ဘူး။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူငါထင်လျောက်ပတ်သောဖြစ်ခဲ့သည်ဒါပေမယ့်ငါအကြီးအကျယ် de-sensitized ခဲ့သည်။ ငါအရက်သောက်ခြင်းနှင့်ငါအပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့၏ပမာဏကြောင့်ကြောင့်တက်မြေဖြူတွေသုံးပြီး။
အကြောင်းခုနစ်လအကြာဈကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုမှန်ကန် gf (ဈယခုနဲ့အတူဖြစ်ကြောင်းကိုသူ) တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကြီးနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ် porn နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အတွေးငါ့ကိုရွံရှာဘွယ်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်တော်တော်များများ (ဈခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, finish ကို couldnt) မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ မကြာမီတွင်အနည်းငယ်ရာထူးအတွက်အိုငါ၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာခြင်းနှင့်ကိုယ်နိုင်။ ငါများသောအားဖြင့်ကိုယ့်နမ်းနေဖြင့်ခက်ခဲရပေမယ့်သူကတာရှည်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်များသည်များသောအားဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ကြာတတ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏စိုက်ထူမှုမှာအလွန်တိုတောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သူမအပေါ်သို့ဆင်းသွားလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏လက်ချောင်းများကိုသုံးလျှင်လည်းသူသည်အော်ဂဇင်ကိုတစ်ခါမျှမခံစားခဲ့ရပါ) ။ နောက်ဆုံးမှာကျွန်မရဲ့အကျင့်ဟောင်းတွေပြန်လာပြီးသူမအဝေးမှာရှိနေတုန်းမှာပဲကျွန်မငုပ်နေတုန်းပဲ။
တစ်ဦးကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာဈ YBOP အပေါ်သို့လဲများနှင့်အရာခပ်သိမ်းသည်ယခုအခါငါ့ထံသို့အသိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အစဉ်အမြဲငါ masturbating / ညစ်ညမ်းအရှုံးမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အကြှနျုပျ၏နံပါတ်တစ်ရည်မှန်းချက်ကဒီလည်ချောင်းနာ ​​ED ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေ့ငါ pm တွင် - အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းကို 17 နေ့ကအမှတ်အသား။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကစိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေနဲ့စိတ်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းဘီယာတိုးပွားလာပြီးနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသောအစားအစာများတခါတရံကျွန်ုပ်တွင်အားတက်သရောရှိသည့်အားကစားရုံသို့သွားပြီးကောင်းမွန်စွာစားသောက်နိုင်သည့်အချိန်များများရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံဘီယာသောက်ပြီးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားချင်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လွန်ခဲ့သော ၄ ရက်ကကျွန်ုပ်၏ gf ရောက်ရှိလာပြီးသူမသည်ကျွန်ုပ်အားကောင်းကင်ဘုံ၌ပေးသောဆု (ကျွန်ုပ်သည် ၉-၁၀ / ၁၀ နှစ်) ဖြစ်ပြီးနောက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည် (၄/၁၀) ။ ဒီဟာကိုပြန်ပြောင်းအဖြစ်မှတ်ယူပါသလား? ငါ 4days reboot ကာလအတွက်ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုတော့ဘူးလို့ထင်လား? ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကိုယ်က chaser effect ကြောင့်ဒီလောက်ဆိုးတာပဲ။ ငါလိုချင်လားဆိုတာမသေချာဘူး။ ငါတကယ်ကိုငါ့ရည်းစားကိုငါ့အခြေအနေအကြောင်းမပြောပြချင်ဘူး၊ အဲဒါကိုသူမကိုမြောင်းဖို့လွယ်ကူနိုင်တယ် (သူမအတွက်လည်းအလားတူခံစားမှုမျိုးမရှိတော့ပါ) ။
အရေးအသားငါ၏စတိုင်အလွန်ခြောက်သွေ့လျှင် PS တောင်းပန်ပါတယ် (အင်္ဂလိပ်ငါ၏အမိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ပါ)
Iငါအသက် ၉ နှစ်ကတည်းက porn ကိုကြည့်နေတယ်။ အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းမှသာလိင်အရတက်ကြွစွာတက်ကြွလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တွင် ED ပြproblemနာရှိကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့ငါမတက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာ ED နဲ့ရှက်ရွံ့ဖို့ငါအသက်ငယ်လွန်းပုံကိုပြောပြပြီးငါ့အသက်အရွယ်ယောက်ျားတွေသွားနိုင်အောင်လမ်းစကိုသွားပြီးနောက်ငါ porn နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်လို့သံသယဝင်လာတယ်။ ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါငါမှာပြသနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့အခါငါသေပြီ။ ပြီးတော့သူမကိုချစ်တယ်။ အင်တာနက်အလွန်အကျွံချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ED အလွန်ညစ်ညမ်းသောပြbyနာများဖြစ်သည့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သတိထားမိမှုမည်မျှရှိသည်ကိုကြောက်စရာကောင်းသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ချစ်သူတွေကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်သော်လည်းသူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်မနှိုးဆော်နိုင်ပါ။ သူမယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်မိန်းကလေးကမှအဆုံးမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့် Medhelp နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားတူအဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ပြီးနောက်မှာငါဟာ porn ကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး၊ ငါ့လိင်တံဟာပုံမှန်အတိုင်းစတင်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ အွန်လိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲ၊ ငါနှစ်သက်သောမိန်းကလေး။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိနေခြင်းကို ၁၈ လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီဆံပင်ကျွတ်တာကို Propecia (finasteride) လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးကြောင့်လားဆိုတာမသေချာသေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လိင်ဖျော်ဖြေမှုကိုလျှော့ချတာကဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပဲ။ သို့သော်လည်း၊ လွန်ခဲ့သော ၁၈ လကကျွန်ုပ်သည် propecia ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်များစွာနှင့်တွေ့ပြီးသွေးစစ်ဆေးပြီးနောက်ဆရာ ၀ န်အားလုံးကကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသည်ဟုနှင့်ဤအရာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့လိင်မှုကိစ္စပျောက်ကွယ်သွားမှုမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအချိုဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ငါကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကဘယ်တော့မှပြproblemနာမရှိဘူး။ ငါက porn ကိုတကယ့်လိင်ကိစ္စထက်ပိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီလိုတောင်မှငါတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံနှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ဘူး။ ငါ ၁၂ နှစ်အရွယ်ကတည်းက porn ကြည့်နေတယ်။
သို့သော် ၂၀၀၇ နွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်၌ကျွန်ုပ်သည် Erectile ပြproblemsနာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိမ့်အမြင့်ရှိခြင်းကိုစတင်သတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် propecia မူးယစ်ဆေးဝါးကိုချက်ချင်းအပြစ်တင်ခဲ့သော်လည်းဆရာဝန်များသည်ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိချေ။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါနင့်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကမင်းကိုအထင်မကြီးစေနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်အပြာများသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမျိုးသမီးများနှင့်မထိတွေ့ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုကြည့်ရှုလာသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစွဲသူများအတွက်၎င်းကို“ တင်းမာမှု” ဟုခေါ်ကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွန်အကျွံမသုံးမိအောင်ငါမဖတ်ရသေးခင်အထိညစ်ညမ်းလွန်းခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နှိုးဆော်ခြင်းခံရနိုင်သည့်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်နိမ့်သည်ဟုတစ်ခါမှတစ်ခါမျှမထင်ခဲ့ပါ။
နောက်တော့: ဟေ့ယောက်ျားတွေငါမူးယစ်ဆေး propecia မှအမှန်တကယ်ဆက်စပ်မအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သမျှသောငါ၏အလိင် drive ကိုကိစ္စများထုတ်ပြန်သွားလေ၏။
၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းသောအလွဲသုံးစားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ငါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ကတည်းကငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအလွန်အမင်းခံစားခဲ့ရတယ်။ အခုငါညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ရုန်းကန်နေရသည် ယခုမူကားငါ၏လိင် drive ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ထူထောင်နေသည်။
John - လတ်ဆတ်သောအစ (ED / PE) - [1/90]
ငါ porn စွဲအပေါငျးတို့သဘုံလက္ခဏာတွေရှိသည်, ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ရွံရှာရုံသာဤအချက်သို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပြင်ရန်တစ်ခုခုမလုပ်ပါကအမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါED ရတယ်။ စွဲလမ်းမှုကနေငါ PE ကအစပျိုးပေးတယ်။ ငါညမှာညနေခင်းတီဗွီဖုန်းအကြောင်း၊ ကလေးဘူတာရုံအကြောင်းသိသွားတဲ့အချိန်မှာညစ်ညမ်းမှုတစ်ခုလုံးစတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ် - ငါအဲဒီတုန်းကအလယ်တန်းကျောင်းမှာပဲရှိသေးတယ်၊ အိပ်ရာထဲကခေတ်တွေအတွက်တစ်ခါတစ်ရံဒါကိုကြည့်ပြီးကြည့်နေတာကိုး။ ငါအရမ်းလိုချင်ခဲ့တယ်မဟုတ်နိုင်ဘူး ထိုအခါအခြားဆောင်းပါးများအားလုံးသွားသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်မလုံလောက်တော့ဘဲပိုမိုခက်ခဲသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးသင့်လျော်တဲ့ရည်းစားကိုရခဲ့ပြီးသူနဲ့အတူ ၂ နှစ်နေခဲ့တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့လိင်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီးပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး။ ပြbrokeနာတွေကငါတို့ပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးညစ်ညမ်းတဲ့ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ဖို့နေ့တိုင်း porn ကိုနှိပ်လိုက်တာကပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်မမှာမိန်းကလေးစုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပြီးအားလုံးအောင်မြင်ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ဟာလိင်ကိုမလိုချင်ကြဘူး၊ အဲဒါကပါးစပ်အတွက် fetish ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ငါနဲ့ငါ့ကောင်မလေးဟာအချိန်ကုန်ခဲ့ ပါးစပ်နဲ့လုပ်တာမျိုးမလုပ်ရပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ငါစကားစလိုက်တိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမူးရူးသွားတယ်။ အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသံတွေပါလာပေမယ့်မင်းတို့အားလုံးနားလည်နေကြပြီ။
အခုအသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်မြို့ကဆင်းသွားပြီးညမှာတစ်ခေါက်မျှမျှတတရှယ်ယာရခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော့် ED တိုးတက်လာခဲ့ပေမယ့်အရက်ကပိုဆိုးနေတယ်။ ငါမူကားအရက်ကိုအပြစ်တင်မိသောကြောင့်၊ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်သော်လည်းသင်သောက်သောအခါယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသော်လည်းမင်းလည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ငါရှက်စရာပြောဆိုမှုများငါ၏မျှတသောဝေစုရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ဆက်ဆံရေးက ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအခု ၂ လကြာသိကျွမ်းလာပြီ၊ ကျွန်တော်တို့အတူတူကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ လိင်ဆက်ဆံမှု ၅ ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်၊ ၄ ယောက်ကကျွန်တော်တို့မြို့ကပြန်လာတဲ့အချိန်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကတော့ငါ reboot လုပ်တာတောင်မှဘယ်တော့မှအနှောင့်အယှက်မပေးတဲ့အခါ၊ ကျန် ၃ ခုဟာငါအရင် reboot မတိုင်မီသို့မဟုတ်လေးလေးတွင်ရှိခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်! ။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ ED သန်မာတဲ့ ED ကိုရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ တကယ်ပူနွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့။ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါသော်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်! ။ ငါ reboot လုပ်နေချိန်မှာသူမအိမ်ကိုပတ်ပတ်လည်မှာနေခဲ့တယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိပေမယ့် ၇ ရက်ပဲ ​​PMO မရှိတဲ့အချိန်မှာငါ့စိုက်ထူမှုတွေကပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်မနေနိုင်တော့ဘဲ PE ရှိနေတုန်းပဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကကျွန်မကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့နေရာမှာ၊ ငါဟာနှစ်ခါလိင်ဆက်ဆံပြီးပျော်မွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါပျော်ခဲ့တယ်လို့ဂျာနယ်မှာရေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပြင်နိုင်နေတုန်းသူမကိုလွှတ်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်သူမနဲ့အတူနေပြီးအမှိုက်များတဲ့လိင်မှုဘဝကိုဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကကျွန်မကိုရလာတာနဲ့ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့တယ်။ ငါ porn ကိုမကြည့်ခဲ့ဘူး၊ နောက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံရှာမိတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပျက်အောင်လုပ်မိသလိုခံစားမိလို့ဒီကိုလာပြီးငါ့ရဲ့ဂျာနယ်ကိုဖျက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာအသက် ၄၀ မပြည့်ချင်ပါဘူး၊ ဒီပြproblemနာကိုထူးဆန်းတဲ့နှစ် ၂၀ လောက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။
သူမသည်ပြီးခဲ့သည့်ညကသတ္တုတွင်း၌သူမနေခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောကြောင့်သူမနှင့်အခြားသူများနှင့်ပြုသကဲ့သို့ငါနှင့်သူမငါ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သူမနဲ့နမ်းတာကငါထိုးဖောက်ဖို့အတွက်အလုံအလောက်စိုက်ထူရတယ်။ တစ်နေ့တာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရပ်တည်တဲ့အခါမှာစိုက်ထူတာကအများကြီးအားနည်းနေတယ်။ ၀ မ်းနည်းစွာနဲ့ PE ဒဏ်ရာရသွားပြီး ၄ မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်ရပ်နားလိုက်ရသည်။ သူမဒီတစ်ခါအနည်းငယ်ဒေါသထွက်မိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကအစပိုင်းတွင်ချွတ်ထားခြင်းကြောင့်သူမပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မပျော်ပါဟုပြောခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ဒီမှာငါတို့နောက်တစ်ခေါက်သွားမယ်၊ ငါစင်ကြယ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါပြန်စရမယ်၊ အဲဒီအကြောင်းပြောတာကမင်းကိုတကယ်ကူညီပေးပြီးလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ အခုငါတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ပြfacingနာကိုရင်ဆိုင်နေရပြီ၊ ငါ reboot လုပ်နေချိန်မှာကောင်မလေးကိုတွန်းထုတ်ပစ်နိုင်တယ်။ ရက် ၉၀ သွားချင်တယ်၊ ဘယ်ကနေငါသွားနိုင်မှာလဲကြည့်ချင်တယ်။ ပြန်ပြောပြတာကမင်းရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးနားလည်လာစေတယ်။
သငျသညျ2လုံးဝမှန်ဖြစ်ကြပြီးငါ့ကိုမှုတ်သွင်း အလေးအနက်ထား။ ငါအတူတူပင်ပြissueနာရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ပြhardနာမရှိသော်လည်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အားလျော့သွားသည်။ ၁။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပြproblemနာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂။ ငါပြောသလိုပဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်ရုံတင်မကဘူး၊ တင်းကျပ်စွာပတ်ထားသင့်လက်ချောင်းများ၏ချုပ်ကိုင်ပြီးတော့ကွန်ဒုံးရှိခြင်းနှင့်ကောင်းတဲ့ပျော့ Vagina အတွင်းနှင့်ထွက်လျှောပြီးတော့ပိုပြီးပြင်းထန်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်လက်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာပြီး Soft vagina သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြုလုပ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်လိုက်တယ် ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူပြန်ရတဲ့ခဲ့သည်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လက်မှဖိအားနည်းသောနည်းကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကို၎င်း၏ဟောင်းနွမ်းသောနည်းလမ်းများသို့မလေ့ကျင့်ပါ။ မနေ့ကငါပထမ ဦး ဆုံးအော်ဂဇင် / သက်တမ်းကြာစိုက်ထူခဲ့ရသည်။
wow ဒီဖိုရမ်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ငါသည်လည်းညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာအသက်ငါးနှစ်အရွယ်လောက်ကစပြီးစောလွန်းတယ်။ ပုံမှန်တီဗွီကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နည်းနည်းလေးကကျွန်တော့်ဆီကနေစတင်ခဲ့တာ။ Gill's ကျွန်းမှဂျင်း၊ Three's Company မှဆံပင်ရွှေရောင်ကြက်၊ ရုပ်မြင်သံကြားမှပူပြင်းလှသောမိန်းကလေးများသာဖြစ်သည်။ ငါတောင်5မှာစိုက်ထူခဲ့ထင်မ; အိပ်ယာပေါ်ကပွတ်သပ်လိုက်ရုံလေးပဲ။ ထို့နောက်နှစ်များတစ်လျှောက်ညဥ့်နက်သန်းခေါင်ညင်ညင်သာသာသောညစ်ညမ်းသည့်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်များကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့သည်။ ငါ Boob ကြည့်ဖို့တယ် !!! အဲဒီနောက်မှာ၊ ငါဟာအစစ်အမှန် porn ကိုစပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တုန်းကကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုတောင်မယုံနိုင်ဘူး !! သူတို့ဟာတကယ်ပဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတယ်။ ငါရုတ်တရက် hardcore porn ၏ပုံရိပ်ကနေအပေါ်တစ် ဦး supercharg ခဲယဉ်းတယ်။ ငါ soft-core ကိုဘယ်တော့မှပြန်မသွားဘူး၊
ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားပြီးကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုငှားရမ်းခြင်းများမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ အခုတော့ porn ဟာအလွယ်တကူကြည့်လို့ရပြီ။ ငါလိင်တ ဦး တည်းကနှိုးဆော်ခြင်းမရှိတော့ပါ၊ မျက်နှာပေါ်တွင် orgy သို့မဟုတ် gangbang သို့မဟုတ် *** ဖြစ်ရမည်။ ကြောက်စရာကောင်းတာကပါးစပ်ထဲက pissing တွေကယောက်ျားတွေကငါ့ဘောင်းဘီကိုရွေ့သွားစေတယ်။ ငါရပ်တန့်ဖို့အချိန်င်ထင် !!!! မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ပင်လျှင်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲအမြဲတမ်းရှိနေသည်။
အခုအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ပြfromနာကတောင်မှရှိနေသေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကငါစွဲနေဆဲပဲ။ ရပ်တန့်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်၊ အထူးသဖြင့်အခမဲ့ porn sites အသစ်တွေနဲ့အတူင။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရ, ငါများစွာသောမိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့ပါတယ်; တချို့ကငါ Viagra ကိုမသုံးရင်ငါ့ရဲ့ **** ကိုယောနိထဲ၌ထွန်အောင်မအောင်မြင်ဘူး။ အချို့ကတော့နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သို့သော်ငါအတွင်းပိုင်းပြီးအောင်ခဲယဉ်းသောကြောင့်တကယ်စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ငါ flaccid တကယ်မြန်မြန်ရလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ် Viagra ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, အစဉ်အမြဲခက်ခဲနှင့်အပြီးသတ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးကသူတို့ကအရမ်းပူနေရင်တောင်မှသူတို့ကိုကောင်မလေးလို့ထင်နေလို့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါသူတို့ကိုငါနှင့်ငါကိုယ်တိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးစေသကဲ့သို့ခံစားရတယ် ငါကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမဆိုကလေးတွေရှိသည်မဟုတ်နိုင်မှာကြောက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီဖိုရမ်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ထိုအခါအနာဂတ်၌ငါတို့မိန်းကလေးများရနှင့်ငါတို့ကိုယ်ပိုင် orgy စေနိုင်သည်။ ဟားဟား
အားလုံးယနေ့မင်္ဂလာပါ ငါ erectile ပြproblemsနာများကြောင့်အတိတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်အချို့သောဆုတ်ယုတ်မှုများနှင့်ယခင်မအောင်မြင်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်ကဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုထိ မိ၍ လဲမလာခင်အထိ porn သည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုတစ်ခါမျှမထင်ခဲ့ပါ။ လူတိုင်းဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရသလဲ၊ ဘာတွေကြုံတွေ့နေရသလဲ၊ ကျွန်ုပ်ခေါင်းထဲနှိပ်လိုက်တဲ့အရာများစွာကိုဖတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့လိင်မှုဘ ၀ ကိုရရှိနိုင်ရုံသာမကပိုကောင်းတဲ့ဘ ၀ ကိုရှင်သန်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းစိန်ခေါ်မှု / ပြန်လည် reboot လုပ်ဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ယခုတွင်ငါသည် ၁၀ ရက် (P no M၊ no nada မရှိ) ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမိသည်မှာအလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ရက်အတွင်းပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ပုံပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတကယ်တကယ်ကောင်းတာကဒီ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အချက်အလက်တည်ရှိမှု၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ထောက်ပံ့နိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်တွင်အောင်မြင်သော reboot နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များ / အကြံဥာဏ်များရှိပါကအလွန်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။ သင်၏အချိန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကောင်းသောနေ့ကလေးများရှိပြီးနေ့တိုင်းအောင်ပွဲတစ်ခုသတိရပါ။
ဝိုး! ထိုအကြောင်းကြောင့်မဆိုပညာရေးသတင်းအချက်အလက်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖော်ပြခဲ့တဲ့မပေးပါ။ ငါသည်ဤအတိအကျငါ၏အပြproblemနာဖြစ်တယ်တော်တော်လေးသေချာဖြစ်၏။ ငါညစ်ပတ်ထွက်ခွာသွားပြီး2ပတ်ကြာရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်မည်သို့သွားကြောင်းကြည့်ရှုမည်။ မင်းဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်ပူမနေသင့်ဘူးလို့မထင်ဘူး၊ ငါ ၂၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိသည်မရှိမဖြစ်။ ဒါဟာကျိန်းသေ porn ပါပဲ !!! ရပ်တန့်ရန်သင့်အလိုတော်နှင့်အတူခိုင်ခံ့သော !!
သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုပို့စ်တင်ဘို့ဤမျှလောက်သင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါ 13 နှစ်အတွင်း porn နှင့်တူသောများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစောင့်ကြည့်တွေနဲ့အတူတူအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါပြီ။ ယခင်ကကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်တွင်အပျိုစင်ဘ ၀ နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ် ၀ င်စားမှုပျောက်ဆုံးသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက်စိုက်ထူအတိတ်၏အရာခဲ့ကြပေမယ့်ငါမူကား porn ကြည့်ရှုနေစဉ်သူတို့ကိုရနိုင်ဘူး။ ခက်ခက်ခဲခဲဆက်လက်နေရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆွပေးရပြီးပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုငြီးငွေ့လာကြောင်းပင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ငါမကြာသေးမီက porn ကိုကြည့်ရှုရန်ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်သဘောပေါက်လာတယ်။ Porn သည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်အားလျော့စေပြီးအစစ်အမှန်ကိုရသောအခါစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါ။
ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြည့်ညှင်းအတွက်ကောင်းသောထင်တယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရေရှည်မှာအန္တရာယ်ရှိသည်။ အရာငါသာတကယ်အားလုံးသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှခြင်းဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ရှိသမျှကိုငါအတူတကွ porn ကိုရပ်တန့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဖတ်နေမှဤသဘောပေါက်သည်။
ဂျာနယ်တစ်ခုစဖွင့်ဖို့ကျွန်မကိုအချိန်အနည်းငယ်ယူပြီးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၄၅ ရက်ခန့်တွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး reboot သို့ချော်တစ်ချောင်းတည်းဖြင့်ရောက်ရှိပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော reboot အဖြစ်ထားရန်ရည်ရွယ်သည်။ S13 / 14 န်းကျင် pics မှ fapping tarted နှင့် 20 အကြောင်းကိုသည်အထိနေ့စဉ်အသုံးပြုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ အခုရည်းစားရပြီ၊ ငါဆက်မလုပ်နိုင်ဘူး YBOP / YBRB ကိုတွေ့ရှိပြီး PMO ကိုအစဉ်အမြဲဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါတော်တော်လေးလွယ်ကူသောညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရသော်လည်းအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးကငါ့ကို sexting လုပ်ပြီးဓာတ်ပုံများကိုပို့ပေးသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ချက်ချင်းပင်ခက်ခဲသွားသည်။ ဤသည်သည်အလွန်ခက်ခဲသောဗီဒီယိုများပင်လှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာနှင့်ကွာခြားသည်။ ကျွန်ုပ်အတော်လေးတိုးတက်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ ဒါပေမယ့်ကောင်းကောင်းသွားနေပုံရသည်။
ကျွန်မအသက် ၁၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ ငါမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဘာမှအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်လားဟုငါထင်နေသည်; သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုအထောက်အကူပြုသောအကြံပြုချက်အနည်းငယ်ပေးပါ။
၁။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်ပါ (ရံဖန်ရံခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်နေစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါသည်။ ) သင်သည်သင်၏ရုပ်ပုံကိုမကြည့်ဘဲမနေဘဲပြန်လည်လေ့ကျင့်ပါကအမျိုးသမီးများနှင့်အတူရှိစဉ်သင်၏စိုက်ထူမှုများကိုမည်မျှတိုးတက်စေမည်ကိုသင်တုန်လှုပ်သွားလိမ့်မည်။ လူ။
၂။ သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါ ပို၍ ထိတွေ့မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ငါ ၇ နှစ်ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟာဒီနေရာမှာအနားယူဖို့မစတင်မချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လောက်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။
3 ။ စိတ်ရှည်ပါ; ငါ့ကိုငါ့အစိတ်ကိုပုံမှန်ပြန်ဖွင့်ဖို့နှင့်အမာခံ porn စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲဆွရှိသည်ဖို့အတှကျအညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မတလကို ယူ. , ငါ (ထိုချောင်းမြောင်းအင်းတန်ဖိုးရှိ) တိုးတက်အောင်ငါ၏အစိုက်ထူသတိထားမိဖို့စတင်ခဲ့အခြားနှစ်ပတ်အတွင်းမီ။
၄ ။ အကယ်၍ သင်သည်စိုက်ထူခြင်းမရရန်သာစဉ်းစားပါက၊ စိတ်အေးအေး ထား၍ စိတ်ပျံ့လွင့်နေလျှင်စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေလိမ့်မယ်။
တူညီတဲ့ပုံပြင်။ 100% ။ ငါနှင့်အတူပါအမှားတစ်ခုခုရှိခဲ့ထင်, တစ်ဦးဆီးရောဂါပါရဂူများနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုမြင်သွား၏။ အဆင့်ဆင့်ဒဏ်ငွေခဲ့ကြသည်ငါတကယ်ကျန်းမာတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်မရဲ့ရုပ်သွင်ပြင်ကိုအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်အနည်းငယ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အကြောင်းပြချက်မရှိ၊ ငါ့ကလေးဘ ၀ မှဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။ ဒါကငါ့အတွက်အချက်တစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာမကြာသေးမီကမှမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းနေသောလိင်နှင့်လုံးဝမဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ပါ။ စကားမစပ်ငါကဒီ scourgefull ညစ်ညမ်းမှုကိုနောက်တဖန်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး (ငါ့ခေါင်းထဲမှာပူနွေးသောမြင်ကွင်းများရှိနေသေးပေမယ့်ငါ့ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မယ်မထင်ဘူး) ။ ကံကောင်းပါစေ
အဆိုပါခရီးကိုငါ့ယောကျ်ားဘဝပြန်ဖြစ်ရန်, စတင်ခဲ့သည်။ နေ့ 11 (ဒီထက်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်)
ငါ 23 နှစ်ရှိပြီပေါ့။ အမေနဲ့အတူအိမ်မှာနေပါ ၁၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းကကမ္ဘာပေါ်မှာမိန်းမမရှိဘူးလို့ထင်နေတာ။ အစောပိုင်းနှစ်တွေအားလုံးဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေဖြစ်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ယူနိုက်တက်စတိတ်ကိုပြောင်းပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အင်တာနက်ရလာတာကအင်တာနက်ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ဘဝမှာဘာမှမရှိဘူး ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာငါ့အမေနဲ့အတူနေပြီးလုံးဝဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး အလုပ်မရှိဘူး၊ ရည်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုမမေးပါနဲ့။ ရည်မှန်းချက်မရှိဘူး၊ ရပ်ကွက်ကောလိပ်မှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်၏လူမှုဘ ၀ အခြေအနေအရကျွန်ုပ်သည်လျောက်ပတ်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကကျွန်ုပ်ကိုခိုင်မြဲသောမိတ်ဆွေများဖွဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်မိန်းကလေးရည်းစားများထံမှတားဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ငါပစ်ကပ်အကြောင်းကိုယခုနှစ်အနည်းငယ်သိနှင့်ငါ့ချဉ်းကပ်မှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကျော်ကျော်နိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ပေမယ်ငါ့ကိုသူမတက်နှင့်ငါသူမ၏ချစ်စရာရှာတွေ့ကြောင်းသူမ၏ပြောပြပေမယ့်မိန်းကလေးတစ် ဦး အဘို့အကြှနျုပျကိုကြိုက်နှစ်သက်ဖို့အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်
ငါအဆက်မပြတ်နှင့်ချက်ချင်းပျော်မွေ့ဖို့ငါ့အသက်ကိုလွှင့်ပစ်ပြီ။ ငါ PlayStation, Netflix, junk အစားအစာ, Coke ကစားခြင်း, ရုပ်သံကြည့်ရှုအိမ်မှာတည်းခိုငါ့အချိန်များ၏ 98 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြုန်းနေကြတယ်။ သငျသညျ .. အဆက်မပြတ်ချက်ချင်း arousal အပျော်အပါးလှုပ်ရှားမှုများကိုငါသိ၏။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူ့စွန့်ပစ်မှု၏ဤသနားစရာဖြစ်ဖို့မထင်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိအတွင်းပိုင်းနက်ရှိုင်း။ ကျွန်တော့်အဖေသည်ကျွန်ုပ်ရရှိသောတိုင်းပြည်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးသောအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အဖေသည်လည်းအလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ငါပိတ်မိနေပြီးတွင်းထဲကနေမထွက်လာနိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ပြီးစည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားရတယ်။
ငါဒီမှာ rebooting အကောင့်အားလုံးကိုဖတ်ပြီးနောက်, YBOP နှင့် Reddit ထောင်ပေါင်းများစွာသောငါကဲ့သို့သောလူတွေရှိတယ်အဲဒီမှာရှိကွောငျးကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ပြီးတော့သူတို့မှာဒီဘ ၀ မှာကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့ပြhadနာရှိတယ်ဆိုတာတောင်မှမသိတဲ့
ဤအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ပြီးနောက်ကိုယ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ reboot ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးလစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နေ့က Streak ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဒါအံ့သြဖွယ်ခံစားရတယ်။ ငါမိန်းကလေးငယ်များငါ့ကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့် facebook ကို / get နံပါတ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့ add ဖို့ကျွန်မကိုမေးမွခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာအကြီးအအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. ဈအများအပြားကြိုးစားမှုအတွက်ပြန်ရောက်သွားတယ်။ ငါ k9 installed ကောင်းသောအဘို့အကြှနျုပျ၏ ipad ပိတ်ဆို့, ငါ့ဖုန်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအပေါ်ပုံရိပ်တွေပိတ်ဆို့။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့် relapsing စောင့်ရှောက်လော့။ ငါသည်ငါ့အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးအစပျိုးခြင်းထဲကနေပျောက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူတို့စဉ်းစားမရခဲ့သည်ကိုထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါ့ဦးနှောက်ကိုပြုပြင်ပြန်ငါ၏အယောကျ်ားဘဝရဈဖြစ်လို့ယူဆတယ်သောယောက်ျားသည်နိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ တဖန်ငါအသက်တာ၌အမှုအရာအောင်မြင်ရန်ငါ၏အလိုဆန္ဒရှိချင်တယ်။ အခုအချိန်မှာကိုယ်ဘာမှလုပ်ဖို့သုညအလိုဆန္ဒရှိသည်။ ဘဝကစို့နဲ့မကောင်းတဲ့ကိုစို့ပုံရသည်။ အပြည့်အဝကဤခရီးပိုကောင်းဘို့အကြှနျုပျကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်ကိုယ်သစ်တစ်ခုလူတစ်ဦးအဖြစ်အခြားဘက်ခြမ်းကိုဖြတ်ပြီးလာနိုငျမျှော်လင့်ပါတယ်။
Oh နားထောင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကဒီဂျာနယ်ကို update ပါလိမ့်မည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်မအသက် ၂၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိအရာအားလုံးကျန်းမာနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊။ အစပိုင်းမှာတော့ဆေးကူပေးရုံနဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက် ၁ လ ၁ လကြာမှဆေးလိပ်၊ နီကိုတင်းအစာအိမ်နဲ့ညစ်ညမ်းဆေးတွေမသောက်ဘဲနဲ့ငါမလိုအပ်တော့ဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတာသေချာမသိပေမယ့်နီကိုတင်းအစာအိမ်နာကိုပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှုနဲ့ဆက်နွှယ်တာကိုအသုံးပြုခြင်းဟာအနည်းဆုံး၎င်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊
ငါလွန်ခဲ့သော ၈ လတာကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက်ခြင်းထက်စာလျှင်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ခြင်းကအမှန်ပင်ပိုမိုခက်ခဲသည်။ လိုအပ်ရင်မဟုတ်ရင်မင်းရဲ့ Jimmie လက်ကနေဝေးသွားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏တိုက်တွန်းမှုများကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုင်ပြီးရုံသာထိုင်ပါကနောက်ဆုံး၌သင့်အားနှိုးဆွပေးလိမ့်မည်ဟုလုံးဝသဘောပေါက်နိုင်သည်။
ငါပေမယ့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲနှင့်အဆက်မပြတ်ငါအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပတ်အစားအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ရက်ကဆင်းထားရှိမည်ငါ၏အ **** ဖမ်းဆုပ်ငါ့လက်ရှိသည်မဟုတ်ဖို့ကြိုးစားအတူငါ masturbated ကြောင်းဝန်ခံပါလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်၊ မင်းကမင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ခံစားမိရင်တောင်။ ငါသည်ငါ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ပေးခဲ့တယ် (တကယ်တော့မင်းကကန်ဖို့အတွက် ၃ လလောက်ကြာနိုင်တယ်) မင်းသိပြီ။ အခုငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးကျန်းမာနေတယ်။ အရှုံးမပေးပါနှင့်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှသာလျှင်အရာရာသည်ဤ မှနေ၍ ပိုကောင်းလာနိုင်သည်။
၂၂ နှစ်ရှိပြီ porn သွေးဆောင် ED ။ တစ်လ 22 မှာမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ။ အဲဒါကိုတက်နိုင်ပေမယ့်မတက်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ပြိုကွဲသည်အထိဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် သူမနှင့်အတူသုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးပြီးတော့ porn ကနေအချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
ဆိသကဲ့သို့ငါကြည့်ရှုရန်ညှိုးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ , အသေးစားအဆင်မပြေ, ထွား, ဆိုးရွားလှသောဥပဒေဝက်ခြံနှင့်အတူနှောငျ့။ ငါကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခြင်းကိုမြော်လင့်ဘယ်လိုအခြားကလေးတွေများကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်။ ပထမဦးစွာနမ်းကောလိပ်၌ငါ့ပထမနှစ်၏ဒုတိယစာသင်ခဲ့သည်။ ငါ၏အဒုတိယနှစ်၏ပထမရက်သတ္တပတ်ကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ငါသည်ငါ့အဆင်မပြေအဆင့်မှကြီးပြင်းလာတယ်။ ယခုတွင်ငါသည် ၅ face ၁၁ friends ၁၇၃ ပေါင်သန့်ရှင်းသောမျက်နှာနှင့်မိတ်ဆွေကောင်းအုပ်စုတစ်စုရှိသည်။ ငါမိန်းကလေးများနှင့်အတူရနိုင်ကိုငါသိ၏။ ငါနှင့်တက်ကြွကျန်းမာသန်စွမ်းသောလိင်ဘ ၀ ရှိခြင်းသည် porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် YBOP နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အားလုံးအချိန်စံချိန်: 45 နေ့ရက်များမျှ PMO ။ 57 နေ့ရက်များမျှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (လက်ရှိ reboot)
ပန်းတိုင်များ - reboot ။ ငါနေ့ရက်များကိုရေတွက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အဆုံးပန်းတိုင်မရှိ။ YBOP အရပြန်လည်ထူထောင်ရေးလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်ကြောင်းသိလိမ့်မည်။ ငါမလုပ်ခင်ရက်ပေါင်း ၆၀-၁၂၀ အတွင်းမှာဖြစ်မယ်လို့ငါထင်ပေမယ့်ငါကဖိအားမပေးပါဘူး။ ငါအတက်အကျရှိလိမ့်မယ်ငါသိ၏။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း: ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၉၀ လုံးလုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမပြုပါ။ ဒါကိုအကောင်းအတွက်စွန့်လွှတ်ချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာလက်တွေ့ကျရည်မှန်းချက်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ လူတွေသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြေအနေတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်။
အလွန်အလားတူပြproblemနာ, ဒါပေမယ့်ငါနောက်ထပ်တစ်တွန့်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါကအတူတူပါဘဲ၊ porno ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်မအိပ်ရာမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိနေတဲ့အခါဘာမှမအလုပ်လုပ်ဘူး ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်မအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်အတူညစာစားခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူပြန်လာပြီးသူမနှင့်အတူထွက်နေခဲ့သည်။ သင်သိသောနောက်ထပ်အရာတစ်ခု - စီးပွားရေးကိစ္စနှင့်ဘာမှမဖြစ်ခြင်း။ ငါ mortified ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်မိန်းကလေးအလှည့်အတွက်သူမထွက် weirded ခဲ့သည်ဒီတော့ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
ယခုငါအခါအားလျော်စွာအနှိပ်ခန်းသို့သွားပြီအဲဒီမှာပြNOနာမရှိအရာကိုခန့်မှန်းပါပြီ။ ငါဟာအစစ်အမှန်ဘဝနဲ့လိင်လုံးဝမပတ်သက်တော့သလိုပဲ ပြီးခဲ့သည့်ညကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာသည် ၁၀ ရက်ပတ်လုံးမငြူစူခြင်း၊ ကျန်တဲ့တစ်သက်လုံးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကိုင်တွယ်မှာကိုအရမ်းကြောက်တယ်။ ၉၉% သောအရာသည်ကျွန်ုပ်ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုကျိန်းဝပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ဆေးတွေကရွေးချယ်စရာတစ်ခုလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့အပေါ်မှာမှီခိုနေရတာကိုငါကြောက်တယ်။ ငါတကယ်ကြောက်ပြီးရှက်တယ် အဆိုးဆုံးကတော့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အရှက်ရမှုတွေငါ့ခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်။ ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရတဲ့အခါငါစဉ်းစားနိုင်သမျှအရာအားလုံးပဲ။
ငါကဒီမှာအများဆုံးလူတိုင်းကဲ့သို့တူညီသောလှေ၌ရှိ၏။ ငါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်ချိတ်ဆက်ကာအမှန်တကယ်မိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကြိုးစားနေသည့်အခါတစ်ဦးစိုက်ထူထားရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါအမှန်တကယ်မိန်းမနှင့်လိင်မရှိတော့ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားရဖို့ကြီးမားတဲ့အလုံအလောက်ကန်ခဲ့ကြောင်းသိအဖြစ်ဤသည်, ငါ့နေ့စဉ် porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအအေးကြက်ဆင်ရပ်တန့်ထဲသို့အကြှနျုပျကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ အအေးကြက်ဆင်၏တစ်ပါတ်နောက်မှငါသူမ၏နှင့်အခြားအဘယ်သူမျှမသွားနှင့်တဖန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါမကောင်းတဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမိမိအိမ်သို့သွားလေ၏။
တစ်ပတ်အကြာမှာ၊ သုံးပတ်နီးပါးမျှသောညစ်ညမ်းသောအနုပညာနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအပြီးတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤမိန်းမနှင့်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ငါတကယ်ထွက်ဖိစီးခဲ့သည်။ ငါဒီလောက်ရှည်လျားတဲ့အအေးကြက်ဆင်ကိုဖြတ်ပြီးငါ့ကိုငရဲအဖြစ်ကနေထွက်သွားစေလိမ့်မယ်လို့တကယ်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါကဆန့်ကျင်ဘက်ပဲလို့ခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ libido သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခံရနိုင်သည်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့ကြီးရဲ့နံနက်ခင်းငါဒီမိန်းမနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့တကယ်လုပ်ခဲ့သလိုပဲ၊ တကယ်တမ်းခံစားရမှာပါ။ ငါဆိုလိုတာကမင်းသိရင်ဖျော်ရည်ဟောင်းပြန်လာပြီလို့ငါခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါတစ်နေ့လုံးကအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီညမှာငါစိတ်ပူနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်သူမအပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအချိန်ကုန်လာသောအခါသူမကိုတကယ်လိုချင်ခဲ့သည် (DDD porn ကြယ်အချို့မဟုတ်) - ငါဖျော်ဖြေခဲ့သည်!
ပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊ ငါက porn နဲ့လုံးလုံးလုပ်ပြီးပြီ၊ သင်၏အသက်တာမှ **** ကိုရယူပါ။
Re: ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်ပြုလိမ့်မည် (နေ့ ၆၁) ။ ။ ။ "Relapsed" .. ငါ့ကောင်တာကိုစပြီး။ (DAY90)
ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ လကငါ ED ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါအွန်လိုင်းမှာစလေ့လာခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စကို porn သွေးဆောင် ED အကြောင်း youtube ဗီဒီယိုကြည့်နေရင်းဒီ site ကိုပို့လိုက်တယ်။ ငါ7နှစ်လောက်ညစ်ညမ်း / အင်တာနက်စွဲလမ်းခဲ့ကြပြီသဘောပေါက်လာသောအခါငါအံ့သြသွားတယ် ငါအတိတ်ကိုခဏလောက်စဉ်းစားရင်းအရွယ်ရောက်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တဲ့တစ်နေ့ကိုနာရီပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် ငါ ၆ တန်းတစ်ဝိုက်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ကောလိပ်တက်တုန်းကငါ့ရဲ့အကျင့်တွေကပိုဆိုးလာတယ်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့ ၁၄ နာရီကစားခြင်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည့်အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာကျောင်းနေ၊ ဂိမ်းနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေပါဝင်တယ်၊ ငါ porn ကိုတစ်နေ့နာရီ၊ တစ်ခါတစ်ရံအကြိမ်ပေါင်းများစွာ (တစ်နေ့လျှင် ၅ ကြိမ်အထက် fapping (lol အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောဝေါဟာရများကိုသေချာမသိ)) ဖြင့်ရှာဖွေသည်။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေရုံသာမကစွမ်းအင်ကိုလျော့ကျစေရုံသာမကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဒါမှမဟုတ်ဝါသနာအသစ်တစ်ခုသင်ယူဖို့အချိန်အများကြီးဖြုန်းခဲ့တယ်။
ငါတကယ်ဤယနေ့မှီတိုင်အောင်ငါ့ဘဝအပေါ်ရှိခဲ့ပါတယ်, ငါ ED ထံမှခံရဖို့စတင်ခဲ့ချိန်အထိငါကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ဘယ်တော့မှမထိခိုက်စေစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်၏အတိတ်ကလိင်ဆိုင်ရာအတိတ်အကြောင်းအနည်းငယ်…။ ငါစွဲနေသော်လည်းမိန်းကလေးများစွာကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးမည်သည့်ပြသနာမှမရှိခဲ့ပါ။ ငါနာရီ, တစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ "ဖျော်ဖြေ" နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အကြိမ်အနည်းငယ်“ ငြီးငွေ့” လာသည်ကိုမှတ်မိပြီးကျွန်ုပ်၏ gf နှင့်အတူကြည့်ခြင်းထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုမည်ဟုမှတ်မိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတိတ် gfs အနည်းငယ်နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့လျှင်နာရီပေါင်းများစွာကြည့်ရှုသည့် porn ကိုစတင်ကြည့်ရှုသည်။
လွန်ခဲ့သော ၇ လကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှေ့သို့…ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ED ပြandနာများစတင်ခဲ့သည်။ စာမေးပွဲရက်သတ္တပတ်အလယ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းအိပ်ငိုက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် ရလဒ်ကတော့ ED ရောဂါခံစားနေရတဲ့လူတချို့ကိုမကြာသေးခင်ကပဲသိလိုက်ရတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အင်တာနက် porn ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်နေပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ porn စွဲလမ်းမှုကိုကုသခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိလိမ့်မည်ကိုမသိသော်လည်း၎င်းသည် ၂ လအတွင်းဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်နှင့်တွေ့ရခြင်းကြောင့်ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့နောက်မတိုင်မီပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ငါသည်လည်း cialis နှင့် Viagra သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည် ... မခိုင်မာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းမရှိ, ငါနှစ် ဦး စလုံးအပေါ် 7-2% သစ်သားရနိုင်ခဲ့သည်။
တိုက်ဆိုင်စွာဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းတစ်နေရာရာမှဖတ်ပြီးနောက်၎င်းသည်အထောက်အကူပြုမရသိရန် porn / fap ချိုးဖောက်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ငါ5ရက်ကြာရှည်ခံနိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါဟာချုံးချုံးကျသွားတယ်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစွာ horny နှင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော / မတည်ငြိမ်သောခံစားရတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကနည်းနည်းလေးမြင့်နေတယ်။ အိုး, ငါသည်လည်း 10 နှစ်ကျော်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါခံစားခဲ့ရပါပြီ, ဒီညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူလူတို့အဘို့အဘုံဖြစ်ပုံရသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါမနက်ဖြန် ၁ ရက်ကိုစမည်။ အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၉၀ အတွက် porn / touch မပါပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေသမားဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမနှစ်သက်နိုင်သည့်အတွက်ရှက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်ထပ်မံဖိစီးမှုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ED ဖွင့်တုန်းကငါနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကသူမနဲ့အတူငါ့ကိုလှည့်စားခဲ့တယ်။ ငါ ED ပြproblemsနာရှိရင်သူက“ အဆင်ပြေတယ်” လို့ပြောရင်သူမယုံကြည်နိုင်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမလွှဲမရှောင်သာသိတယ်၊ အထူးသဖြင့်ငါတို့အသက် (၂၃) နှစ်။
ဝိုး! ကျွန်ုပ်အခက်အခဲရှိသောသူနှင့်ယခုအချိန်အထိမည်သည့်အခါမျှဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါမိန်းကလေးတွေရလာတာနဲ့အမျှတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ငါ ၁၄-၁၆ နှစ်အရွယ်မှာရည်းစားရှိခဲ့တယ်။ ငါလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။
ထို့နောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်အထိလိင်ဆက်ဆံရန်အခြားအခွင့်အရေးမရှိပါ။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ အသက် ၁၈ နှစ်မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။ အောင်မြင်မှုမရှိဘဲထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားခဲ့သည် ဝမ်းနည်းစရာကသူမမှာနွေးနေမှန်းသိသော်လည်းငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်နှိုးဆွခြင်းမရှိသောကြောင့်သူမနှင့်ပြbrokeနာတက်ခဲ့သည်။
အဲဒီနောက်မှာတော့မိန်းကလေးအတော်များများနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကျွန်မမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ (ဒီပြtheနာကငါမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာရင်ပေါ့) ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကကျွန်ုပ်သိသောအခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ထွက်သွားသည်။ မည်သည့်အရာသို့မဆိုပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်သော်လည်းသူမမှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ငါကံကောင်းတယ်ဆိုရင်အများဆုံး။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်မူးလွန်းနေသလားသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အတွက်ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိသည်။
ကျနော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားခဲ့နှင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်လာသောအခါငါတကယ်စိတ်ဓာတ်ကျလိမ့်မယ်။ ငါဒီလိုမျိုးမိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်မရနိုင်ရင်ငါလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအသက် ၂၀ ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်မပြောနိူင်သောရှက်ရွံ့ဖွယ်အခိုက်အတန့်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြသနာများသည်ကျွန်ုပ်၏ **** နှင့်စိတ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ကိုယ့်လက်ကိုကြည့်ခြင်းအတွက်သာအသုံးပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်။
ဒီသီချင်းကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမင်းတို့အားလုံးဟာငါနဲ့အတူတူပဲပြthroughနာကိုကြုံတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်သင်ရပ်တန့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသင်အောင်မြင်မှုအချို့ရသွားတယ်။ ငါက porn ကိုလုံးဝမကြည့်တော့တာ၊ နည်းနည်းလေးမှတတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ် ဖြစ်နိုင်တယ် ငါတကယ်အလုပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
21yo၊ တခါတရံ ED - My Floppy Journey !!!
ကောင်းပြီ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်တော့်အတွက်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများမှာဂန္ထဝင်“ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မအောင်နိုင်” သို့မဟုတ်“ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းလေးအနေဖြင့်လည်းကျွန်ုပ်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်အဘယ်ကြောင့်ထွက်မလာပါသနည်း” ဟူသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားယောက်ျားတွေငါ့ကို reboot လုပ်သင့်တယ်ထင်တာကိုသိစေဖို့နောက်ခံအကြောင်းတစ်ခုပြောပြမယ်။
ငါအကြောင်းကို 12-13 နှစ်အရွယ်မှာမာစတာစတင်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်တီဗွီမှသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းများမှမိန်းကလေးများကိုကျော်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ... ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘရော့ဒန်းကိုရခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်အသက် ၁၅ နှစ်မှာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေရိုက်လာတာ (၁၅) လောက်ရှိပြီးကျွန်တော်မကြာခဏစပြီးလုပ်ခဲ့တာ။ အစပိုင်းတွင်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်သော်လည်းငါအသက်ကြီးလာသောအခါတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်ခန့် ၂၃ ကြိမ်ဖြစ်လာသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအပျိုစင်ဘဝအသက် ၁၆ နှစ်မှာဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်လိင်ဆက်ဆံတာကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၈ နှစ်ကနေ ၂၀ ကြားကြားမှာ ၂ နှစ်လောက်“ မြုံနေသော” စာလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ အများကြီး။
ငါဤ "စာလုံးပေါင်း" ပြီးနောက်ပြmsနာများကိုစတင်မြင်ပေမယ့်အစဉ်မပြတ်ငါတော်တော်လေး pissed ခဲ့ဒါကြောင့်ငါကအပေါ်အပြစ်တင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသမ္မာသတိရှိခဲ့အခါဖြစ်ပျက်မှစတင်, ငါစိုးရိမ်လာသောအခါ။
ငါငါ့အပြဿနာများ google နှင့် yourbrainonporn.com တွေ့ရှိခဲ့ရသောအခါ။ ငါအချို့ slut စောင့်ကြည့်ခဲ့လျှင်ကျွန်မသုက်ပိုး၏တစ်လီတာကိုဆင်း guzzled, ငါကအကြောင်း somthing ခဲ့ရတယ်သိတယ်, ငါ့ဒစ်သာစကားများထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီဟာကိုငါတွေ့မိတဲ့အခါငါဘယ်လောက်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုစကားလုံးတွေကမဖော်ပြနိုင်ဘူး။ ငါကအသက် ၁၈ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့အသက် ၁၈ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီမှာပြtheနာကအတူတူပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၇ နှစ်မှ ၈ နှစ်အရွယ်အထိညစ်ညမ်းမှုများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီး၊ ၁၁ နှစ်အရွယ် မှစ၍ မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအထောက်အပံ့ဖြင့်စိုက်ထူရန်အခက်အခဲမရှိခဲ့ပါ။
ငါသာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့တကယ့်ကိုကံကောင်းခဲ့ဖူးတယ်။ မင်းရဲ့ပုံပြင်တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါတို့အားလုံးဟာအတူတူပဲ။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါကလစ်မရိုက်မီကျွန်ုပ်သည်ခက်ခဲသည်။ ကျွန်မအိပ်ရာပေါ်မှာဆေးလိပ်ပူပြင်းတဲ့အဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိနေချိန်မှာသူမနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါ၊
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအရာတစ်ခုခုကတက် add မပါဘူးငါ porn ပြtheနာကထင်! ငါအဲဒီမှာအန္တရာယ်ဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်မယုံနိုင်ပါ။ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်အခြားယောက်ျားများကအကြံပြုသောနည်းစနစ်အချို့ကိုကြိုးစားရန်အတင်းအကျပ်သွားမည်။ ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှအတွက်ကံအကောင်းဆုံး!
ဂျာနယ်, 90 ရက်ပေါင်းမျှ pm တွင်စီစဉ်ထားသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးလာကိုမဆိုကုစား
YBOP ကိုမတွေ့မှီကကျွန်ုပ်သည်မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာခံစားခဲ့ရသည်။ ငါအသက် ၂၁ နှစ်မှာ ED ဆေးသောက်ရမလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်နေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ gf နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတာ၊ ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုသာခံနိုင်မယ်၊ ယခုငါအမှန်တရားကိုသိပြီ။ ဤဂျာနယ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရာဇ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၁ နှစ်ဖြစ်ပြီး ၁၃ နှစ်အရွယ် မှစ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး ၁၅ နှစ်မှစ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူးသည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကပင်ငါဖတ်ရှုခဲ့သည့်အတိုင်းဤခက်ခဲမှုက ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။ YBOP မှတစ်ဆင့်ဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်ပတ်သက်သော ED လက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းချက်ချင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖော်ပြချက်နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး အားကြာမြင့်သည်ဟုဆိုသောအစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းစိတ်ပူပန်ပြီးငါလုပ်နိုင်မည်ဟုသံသယရှိသည်။ ငါကတစ်ရက်မှာတစ်ရက်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါ ၁၀ ရက်နေ့ညမှာမရှိဘူး၊ ၅ ရက်တောင်မရှိဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေကိုငါလာခဲ့ပြီ။ ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်သင့်တော်သောစိုက်ထူမှုကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းအကူအညီအတွက်
သူမသည်ရက်ပေါင်း ၂၀ တွင်ထပ်မံလည်ပတ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် ၁ လတိတိမဟုတ်ဘဲ ၂၅ ရက် O မပါ ၀ င်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိသော်လည်းစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် ' သူမလာတဲ့အခါနောက်တဖန်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ်။
ငါတော်တော်တက်ကြွတယ်၊ ငါ jiu jitsu ကိုတစ်ပတ် ၄ ရက်လေ့ကျင့်ပြီးလေးနာရီလေးကိုလည်းလေးတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကကျွန်မရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်စေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါဒီဂျာနယ်ကိုနေ့စဉ် update လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၃၂ နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်၏ libido သိသိသာသာကျဆင်းသွားကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါဟာခြောက်လလောက်တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်တာထက်ပိုကြာလေ့မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီကာလအတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆွခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအသစ်ဟာလိင်ဆက်ဆံမှုမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေလျော့နည်းစေတယ်၊ ငါမကြာခဏငါ၏အစိုက်ထူဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်လုံးဝမှာတ ဦး တည်းမရနိုင်ပါ။
မကြာသေးမီကကျွန်မအသစ်တစ်ခုမိန်းကလေးချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့ပြီး, ကြှနျုပျတို့ရငျးနှီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပထမနှစ်ကြိမ်, ငါတစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ဒုတိယအကြိမ်ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမအပြုသဘောရလာဒ်များနှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦး7နာရီဝန်းကျင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ နမ်း, ကို manual, ပါးစပ်, ဘာမျှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ငါသည်ဤချည်အနှံ့သို့ရောက်လာသည်ကား, ED အကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးခြင်းပြီးနောက်တစ်ပါတ် completely.About porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရှုံးမပေးရန်ဆုံးဖြတ်, ငါသညျငါ့မိန်းကလေးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကနေကျပန်းစိုက်ထူရရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပါပြီ, ငါ့စိုက်ထူသောနေ့ရက်များကအားကောင်းလာပြီနေကြသည်။
အကြှနျုပျ၏လိင်စိတ်မရှိ Ed ကယူတာပဲဒါပေမယ့် PE ငရဲ, စိုးရိမ်ပူပန် + စိတ်ကျရောဂါယနေ့တွင်နေ့အဖြစ်, orgasm အားနည်း 0
ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီးအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်၊ ပြီးရင်ငါပြန်ဖြစ်လာရင်ငါ့ကိုသေစေနိုင်တယ်။ အသက် ၂၃ နှစ်
ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုငါ့ပြဿနာများ၏အမြစ်ခဲ့ကြသည်ယုံကြည်ပါတယ်, ငါလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်၌ငါ့လိင်ဘဝယခင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်။ ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြောင်းကိုငါ့အမိန်းကလေးနှင့်အတူပွင့်လင်းဖြစ်ရပြီ, ငါ ED နှင့်နှစ်ခုအကြားယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် link ကိုအကြောင်းကိုသူမ၏စကားပြောပါပြီ။ သူမသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့ကနေ့နီးကပ်လာနှင့်ပိုပြီးပွင့်လင်းရပုံရသည်။
23 နှစ် - ငါ့ဂျာနယ်
ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကကျွန်ုပ် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ငါအသက် ၁၅ နှစ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်ကစပြီး ၄ နှစ်တာအိမ်နီးချင်းယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်တူဆက်ဆံလေ့ရှိတယ်။
ကိုယ့်အသက် ၁၉ နှစ်တုန်းကငါ့ပြproblemနာကစခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့သွားခဲ့တယ်။ တကယ်တော့အဲဒီနေ့ကစပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က၊ ငါ့လိင်တံကတစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုလုပ်ရင်မှပဲလုပ်နိုင်တယ် ငါသာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ထူမှုကိုရရှိခဲ့သော်လည်းစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ငါ့မှာ ၂၁ ရက် PMO မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကပိုကောင်းလာပြီမဟုတ်ပေမယ့် ၄ လထက်ပိုပြီးဆက်လုပ်သွားမှာပါ။
ဟေ့ယောက်ျားတွေ၊ ဒီမှာအတူတူပဲ။ ရေရှည်ရည်းစား, ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးလိင်အစဉ်အဆက်, နှင့်တသမတ်တည်းသူမ၏နှစ်သက်တော်မူ၏။ နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မတို့စကားပြောကြပြီးသူမကသူမမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောနေတုန်းပဲ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာသွားနှင့်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာနိုင်ဘူး။ ငါ porn အနည်းငယ်ကြည့်ပေမယ့်အများကြီးမ။ တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူမနှင့်အဆက်ပြတ်သွားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတစ်သမတ်တည်းကြည့်ရှုခြင်း၊ တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာစတင်ခဲ့ပြီးအမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစသည်တို့ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီး ED-type ပြနာများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်။ ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်“ ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်များဆုံးရှုံးခြင်း” နှင့် ဆက်၍ စိတ်ဖိစီးမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအဆက်မပြတ်လှည့်လည်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထနိုင်ကြောင်းပင်သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ porn အမြဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
HER နဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီ။ အခုငါကတစ်ကိုယ်ရေဖြစ်နေပြီး FB အမျိုးအစားဆက်ဆံရေးကိုဖွံ့ဖြိုးလာပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောပုံသဏ္inာန်ရှိပြီး ၂၇ နှင့်အခြားနည်းလမ်းအားလုံးတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဒီဖိုရမ်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်
ကျန်းမာရေးပြissueနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းရည်ယိုယွင်းမှုကိုကျွန်ုပ်၏တိုး။ အသုံးပြုခြင်းနှင့်အမှီသဟဲပြုခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကနုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးညမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကျပန်းအလှူရှင်အချို့ကိုငါကျိန်းသေရရှိခဲ့တယ်။
ငါသည်လည်းတစ်နေ့တာတွင်တင်ပါးဆုံတွင်းကြွက်သားများကိုကွေးညွှတ်။ ထုတ်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန် Kegel-type လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ဖို့လိုမလိုမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုအရင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါမျှော်လင့်နေတယ်။
ငါ AA အစည်းအဝေးမှာစက်ဝိုင်းပတ်ပတ်လည်မှာထိုင်နေတဲ့စွဲသူ ၁၀၀ လောက်နဲ့တွေ့ဆုံနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းတို့ယောက်ျားလေးတွေကိုမင်းတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ပုံပြင်တွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေ၊ မျှဝေခြင်းနဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေနဲ့ပဲငါသိကျွမ်းလာပြီလို့ခံစားရတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီးအမျိုးသားများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းများပြားစွာမွေးမြူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အီတလီလူမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်တိုးချဲ့မိသားစုသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ ဦး လေး၊ ဝမ်းကွဲမောင်နှမများ၊ ကျွန်ုပ်အဖေနှင့်ကျွန်ုပ်၏အဘိုးပင်လျှင် -“ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရယူပါ” ယခုကျွန်ုပ်အသက် ၉ နှစ်မှစ၍ ကြီးပြင်းလာသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများ (ကျွန်ုပ်အသက်အရွယ်အိုမင်းလာသောအခါအလယ်အလတ်နှင့်ပတ်သက်သောအရာဝတ္ထုများ) တွင်မျှတစွာရှိနေသောအရာများနှင့်ဂဏန်းနှစ်လုံးမှသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်သည်အဓိကဖြစ်သည်။ ဦး စားပေး။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ချီးမွမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ငါအထက်တန်းကျောင်းတလျှောက်လုံးအဓိပ္ပာယ်မရှိသောလိင်ဆက်ဆံနေပြီး၊ ငါ့ရှေ့တွင်တစ်ခုခုမရှိသောအခါ၊
ငါ့ဘဝကငါ့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်။ ငါအတန်းအတွက်အိမ်ပြန်လာတယ်၊ နှစ်ခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပေါ့၊ ပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးကျွန်တော့်ကို“ သူ့ကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်” လို့အိပ်မောကျအောင်ပြောလိုက်တယ်။ ထိုအခါငါရုတ်တရက်အားလုံးငါခြောက်သွေ့သောစာလုံးပေါင်းခဲ့, ထိုသို့အားလုံးလျော်ကြေးပေးရန် porn အားလုံးညစ်ညမ်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်သည့်အခါ၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဒုံးပျံကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ခဏကြာတော့ပျင်းဖို့ပျင်းစရာကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်သုံးခဲ့တယ်။ ငါသည်ငါ့နံနက်သစ်သားဆုံးရှုံးဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်ကနေမကြာသေးမီကပဲငါစိုက်ထူမှုနှင့်အတူမနိုးရ
သိပ်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိန်းကလေးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့သည်။ မော်ဒယ်ပစ္စည်း။ ငါတောင်းလို့ရသမျှအကုန်ရပြီ။ ငါက "အားစိုက်ထုတ် over" သို့မဟုတ် "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု" ဟုခေါ်, (တစ်လျောက်ပတ်သောဝက်ဝံရုပ်၏ဆွဲထုတ်နိုင်သည့်အခါ) ကအလယ်ပိုင်း drive ကိုဆုံးရှုံးစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်တင်ဘာလတွင်ပြန်လည်ခွဲထွက်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ဤ site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂ ပတ်ကျော်အတွင်းညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်ခဲ့ပါ။
တစ်နေ့ကျရင်ငါနိုးလာပြီးဘယ်သူ့ကိုပြန်ကြည့်နေတာလဲ။ ဒါအမှန်ပဲ၊ ကျွန်တော်စပြီးစဖြုတ်လိုက်တယ် ဗစ်တိုးရီးယားလျှို့ဝှက်ချက်ကြော်ငြာတွေကကျွန်မကိုစတင်ပြီးလမ်းပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်များကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းစေတယ်။ ဒါလှပတဲ့အရာပါ မြဲနှင့်မျှော်လင့်နေပါ။
တစ်ပတ်ခွဲလောက် M အခမဲ့မဟုတ်ပါ၊ ၃ ရက်သာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုကို“ စမ်းသပ်” ရန်အပြင်းအထန်တိုက်တွန်းမှုနှင့်порноအချို့ကိုငါကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ငါ rebooting လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစလုပ်တဲ့အခါငါရဲ့ပြproblemနာရဲ့ ၉၀% ဟာ M. ဖြစ်တယ်လို့ငါတကယ်ထင်ခဲ့တယ်၊ ငါဒီဘာသာရပ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တိုင်းကိုမျိုချပြီးနောက် P သည်အဓိကအကြောင်းရင်းကိုလက်ခံသည်။
ငါတကယ်ကငါ့အဘို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါလုပ်2ရက်အကြာကအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့နံနက် (၁း၃) နာရီမှာငါ porn ကိုကြည့်တယ်။ စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းမှာပြIနာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အရမ်းနှိုးဆော်ခဲ့တယ်။ ၂ မိနစ်ကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာမရှိတဲ့ M ကနေတုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားပြီးလိင်တံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတောင်ခံစားမိရတယ်။ ငါ "စစ်မှန်သောဘဝအမျိုးသမီးကိုဤနည်းဖြင့်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ "
နောက်နေ့ညမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်၊ ငါတို့ကရေချိုးကန်ထဲကိုထွက်လာပြီးအိပ်ခန်းထဲကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ငါသူမကိုထိုးဖောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပျော်စရာခံစားချက်ရုံမရှိ။ စက္ကန့် ၃၀ အတွင်း porn = O ကိုကြည့်နေစဉ်ငါ့လက်ဖြင့် ..M ။ (သီအိုရီအရ၊ နှစ်မိနစ်ခန့်ကြာလျှင်ထိပ်ဆုံးမှ) အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အိပ်ရာခင်းနေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်၏လက်ဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုမရှိပါ။ ငါ့အတွက်ဒါဟာငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲက dopamine ကိုငါကြည့်လိုက်တာနဲ့ငါကြည့်လိုက်တာနဲ့တခြားလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားတွေကိုလည်းမတုံ့ပြန်ဘူး။
ဒီတော့ဒီကောင်လေးအတွက် porn မလိုတော့ပါ။ ငါများစွာသောအစီရင်ခံသောဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားမဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်စက်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အစွမ်းမစမှီ၊ အရူးကဲ့သို့ပြုမူနေပြီးကျွန်ုပ်အားကောင်းသောစိတ်အခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ။ ဒါပေမယ့်စောလွန်းသေးသည်။ မင်းကိုငါတင်မယ်
ငါသည်ဤဆွေးနွေးမှုချည်တွေ့ပြီရန်အလွန်ဝမ်းသာပါတယ်! ငါသည်ငါ့အစောပိုင်း 30s ၌လူဖြစ်ကြောင်းကို, မကြာသေးမီကသည်အထိငါ 12 နှစ်ပေါင်းတော်တော်တသမတ်တည်း porn စောင့်ကြည့်ခဲ့သညျ။ ထိုကာလတစ်လျှောက်လုံးငါကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူအိပ်ရာထဲမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာတယ်, ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံမှု၏အချက်မှာ, ငါ့လိင်တံရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ကိုယ့်မိန်းကလေးများအလုံအလောက်ဆွဲဆောင်မှုမယူဆ, ဒါမှမဟုတ်ငါစသည်တို့ကိုဦးနှောက်အာရုံကြော / အရက်မူးခဲ့တာကြောင့်
ဒါပေမယ့်ခဏတာမှသာယာတဲ့မိန်းမငယ်လေးနဲ့ကျွန်မရင်းနှီးခဲ့တယ်။ ငါသူမကိုအရမ်းသဘောကျပေမဲ့လိင်ဆက်ဆံနေချိန်မှာကျွန်မဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပျော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူမသည်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာပြnaturallyနာ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် (သဘာဝကျစွာ) ယူဆသည်။ ငါဆရာဝန်ဆီသွားတယ်၊ စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေပုံမှန်ထွက်လာတယ်။
ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုမတွေ့မချင်းစိတ်ဓာတ်ကျပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ ငါ၏အ GF ကို“ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့သိပ်မကျွမ်းကျင်ဘူး” လို့စိတ်ရှည်စွာပြောလိုက်သည်။ ငါသူမမထင်မှတ်လိမ့်မည်ဟုသေချာသောကြောင့်ငါ porn အစိတ်အပိုင်းကိုထွက်ထားခဲ့တယ်။
ငါကညစ်ညမ်းမှုကိုစစ်လို့မရတဲ့အခါစစ်မှန်တဲ့လိင်ကိုအစားထိုးအဖြစ်သုံးခဲ့တယ်လို့အမြဲထင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါမူကား, ငါသိသာသိတယ်: ငါ့အဘို့, porn * လိင်ခဲ့သည်! ဗွီဒီယိုကြည့်ခြင်းကျွန်ုပ်ချက်ချင်းပင်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အိပ်ရာခင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရှုပ်ထွေးပြီးချိုလွန်းနေခဲ့သည်။
ငါမကောင်းတာကိုမကြည့်တော့ဘူး ကျွန်တော့်ဆရာဝန်ကယေဘူယျ Viagra အတွက်ဆေးညွှန်းပေးတယ်၊ ကျွန်တော်ကနည်းနည်းသုံးခဲ့တယ်။ ကျနော့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်က "အပြုသဘောဆောင်တဲ့သံသရာ" ကိုရောက်ဖို့ပါ။ အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်သည်ဆေးရည်ကိုသောက်ပြီးနောက်လိင်မဆက်ဆံနိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နဲ့အတူငါဖျော်ဖြေနိုင်ပြီး၊ နောက်ဆုံးမှာတော့အခမဲ့လိင်စိတ်နှစ်လကျော်ပြီးနောက်ငါဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကူအညီမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ ငါအရမ်းစိတ်သက်သာရာရ
ဒီချည်မျှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအလွန်လေးနက်တဲ့ပြissueနာအကြောင်းပြောနေပုံရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဥရောပ၌နေထိုင်ပြီး၊ ညစ်ညမ်းသော ED နှင့်ပတ်သက်သည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများသို့မဟုတ်သုတေသနပြုမှုများမတွေ့ရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားများကိုစောင့်မျှော်နေစဉ်လူတိုင်းကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ တကယ်လို့မင်းလုပ်ရင်ဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူး။ ငါ့အတွက်ဒါဟာကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုနှင့်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဟာတွေထဲကဘယ်ဟာကိုပိုနှစ်သက်သလဲ
ကျွန်ုပ်သည် ၄၃ နှစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဤဖော်ပြချက်ကိုကျွန်ုပ်ဆက်စပ်နိုင်သည်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ကျော်အစောပိုင်း / နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် စ၍ ပြောနိုင်သည့်ပြbigနာကြီးများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အတော်အတန်ကောင်းမွန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ ငါလုပ်နေတာ ထို့နောက် 43 တွင်ဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုအလုပ်မလုပ်တော့သောအခါဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ထိုညတွင်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပါတီပွဲများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အပြစ်တင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်တွင်ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ၃၈ နှစ်မှာ - ငါပိုပြီးတသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာတွေကိုစတင်တွေ့ခဲ့တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ၃၉ နှစ်မှာ BAM - ဒါကငါ့ကိုအုတ်တစ်ချောင်းလိုနှိပ်စက်တယ်! ထိုအခါငါအစဉ်အဆက်ရုန်းကန်ခဲ့ကြ (P ကိုရပ်တန့်တကယ်ကိုအလွယ်ကူဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် - ငါ့အဘို့ခက်ခဲခဲ့သမျှသောအခြားပစ္စည်းပစ္စယ) ။
ငါ ybop ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် - တစ်ဖက်တွင်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားသူများရှိကြောင်းသိရခြင်းကနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်ရေရှည် PMO ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများခံစားနေရသောယောက်ျားများစွာကိုတွေ့ရသည့်အတွက်လည်းဝမ်းနည်းပါသည်။ သို့သော်လူ - အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၂၀ ရှိပါကသင့် ဦး နှောက်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ အရာရာကိုမနှောင်းမီ“ ဖမ်းမိပြီ။
သူတို့ကငယ်ရွယ်သောယောက်ျားများသည်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်ပိုကြာသည်ဟုပြောကြသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ၄ ​​နှစ်ကြာတိုက်ခိုက်နေသူဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်သည်တိုးတက်မှုမရှိဟုခံစားမိပါသည်။ ခွေးဟောင်းတစ်ကောင်ကငါထင်သလောက်လှည့်ကွက်အသစ်တွေကိုသင်ပေးဖို့ခက်တယ်။ အသက် ၂၀ ရှိရင်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အချိန်အများကြီးလိုတယ်။ ထူးဆန်းသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်ခရီးသွားနိုင်သည့်၊ ပျော်စရာကောင်းသောအရာများ၊ မျှမျှတတအောင်မြင်သော၊ ဂုဏ်အသရေရှိသည့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်မိန်းကလေးများစွာရွေးချယ်နိုင်သောနေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီပြသနာကြောင့်ငါဆက်ဆံရေးမစတင်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ငါလိုငါတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ရတယ် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအကြောင်းပြောဆိုပါ။ ဒီဟာစို့ မင်းကနုနယ်သေးတယ်၊ ငါတို့ထက်အသက်ကြီးသူတွေလိုပဲလမ်းပေါ်မှာလျှောက်မယ့်အစားမင်းဒါကိုသိပြီး ၀ မ်းသာပါစေ။
ဤသည် nofap အတွေ့အကြုံကိုပဲပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မနေ့ကနံနက်ငါ gf လည်းနိုးခဲ့တယ်, နည်းနည်းအစောပိုင်းကပုံမှန်အတိုင်းထက်နှိုး။ ကျနော်တို့ကနည်းနည်းအဘို့အ chatted ။
ငါဟာမနက်ခင်းမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာကိုများသောအားဖြင့်လိုချင်ပေမယ့်ငါ 'ငါတက်နေ ဦး မှာလား' လို့ငါနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီခံစားချက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အချိန် ၇၀% ကိုကြောက်ရွံ့စေသည်။ ငါ ၃ မိနစ်လောက်အကြာမှာပျော့ပျောင်းသွားတဲ့အထိ ၉၅% shitty sex ကိုဇွန်းအနေအထားနဲ့ရောက်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တောင်ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်မကျေနပ်ကြပါဘူး။
ဒီနေ့မနက်မှာပဲငါတကယ်ဆက်သွယ်မှုခံစားခဲ့ရပြီးထွက်အောင်စတင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံတာကိုစတင်ခံစားခဲ့ရပြီး၊ ကျနော်တို့ကအချို့သောအချက်များမှာ chatting နှင့်ရယ်မောပြီးတော့ပူပြင်းခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာဖြစ်လာခဲ့သည် ... ကျနော်တို့ကအရမ်းသဘာဝကျကျခံစားရတယ်, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်မဆိုင်းမတွနှင့်အတူစူပါချောချောမွေ့မွေ့ရာထူးတစည်းကိုရှောက်သွားလေ၏! ဒီအတွေ့အကြုံကိုတစ်နာရီနီးပါးမျှမျှဝေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တစ်ချိန်လုံးခိုင်မာစွာနေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ၌လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့သည့်အချစ်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်၎င်းသည်ယခုမှ စ၍ ပုံမှန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ Gf စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်သို့ထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထပ်မံမတွေ့ရသေးသော်လည်းလုံးဝ ပြောင်းလဲ၍ ပျော်ရွှင်နေသည်ဟုခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မကျေမနပ်ဖြစ်နေပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသောလိင်စိတ်ခံယူမှုရှိသူဟုခံစားရသည်။ ဤသည် nofap တကယ်ငါဖြစ်နိုင်သည်တောင်းနိုင်အကြီးမားဆုံးဆုကြေးဇူးကိုပါ!
porn အသုံးပြုမှုမှတဆင့်သွေးဆောင် ED
ဒါကမှန်တယ်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
ငါဒီ post ကိုရေးနေရတဲ့ငရဲဘာကြောင့်ဒီဟာကမထီမဲ့မြင်ပြုတာလဲ၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဂူဂဲလ်အမြန်ကနေလူအများအပြားကဒီဟာကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့်ဒီကိစ္စကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဤဆင်းရဲဒုက္ခမှထွက်ပေါ်လာသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာကိုခံစားခဲ့ရသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရသော်လည်းအကြောင်းရင်းကိုမသိသောသူတစ် ဦး ဦး သည်ဤစာဖတ်ခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လျှင်၎င်းသည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံထိုက်သည်။
ဒီတော့တိုတိုနောက်ကျောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် (ကျွန်ုပ်သည် weirdo မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြရန်နှင့်ဤသူသည်မည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သည်ဟုသက်သေပြရန်) ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်မှစ၍ ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းရှစ်နှစ်နှင့် '' အိတ်ထဲမှာ '' ပြissuesနာများကြုံတွေ့ခဲ့ဘယ်တော့မှ။ ရှုပ်ထွေးလွန်း။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလောက်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ထိုဆက်ဆံရေးသည်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အလွယ်တကူလွယ်ကူစွာအမျိုးသမီးများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းခံရသူတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေနေရန်အချိန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသောကြောင့်တဖန်ငါထပ်မံကျူးလွန်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အထိတစ်ညတည်းခိုခန်းများနှင့်တစ်ကိုယ်လုံးချိန်းတွေ့ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခဲ့သည်။ လူမှုရေးအခမ်းအနားများကိုသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အတူအချိန်ကုန်ခံရန်အချိန်မယူဘဲနေရန်ရွေးချယ်ခြင်းထက်လူမှုရေးအခမ်းအနားများကိုအစားထိုးရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်လူတစ် ဦး အနေဖြင့်အမှန်တကယ်ကြီးပွားနိုင်ခဲ့သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ကံမကောင်းစွာပုံမှန်သွေးနီအထီးအဖြစ်, ဒီကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းအတော်လေးအားကောင်းတဲ့တွန်းအားကျန်ရစ်; ငါ quell ဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်တိုက်တွန်းပါသည်။
ဒါဟာပုံပြင်၏ crux ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်; ငါညစ်ညမ်းလှည့်။ ဒီနရောမှာငါအလေးပေးရမယ်ခံစားရတယ် ငါလိုက်တယ်ဘာမှသို့မဟုတ်ခဲ့ဤသည်မှာစံပြုရုံမျှသာဖြစ်ပြီးကြိတ်ခွဲခြင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်း၏ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဒီမှာရှိကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ရရှိနိုင်သည်၊ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ 'အသုံးပြုမှု' အကြိမ်ရေများပြားလာသည်ကိုကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာစွာ ၀ န်ခံမည်ဖြစ်သော်လည်းစွဲစွဲလမ်းသူဟုအခေါ်ခံရသူ၊ ငါရေရှည်ဆက်ဆံရေး၌ရှိစဉ်အခါ၌ပင်ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်လောက်ကြာအောင်ရှေ့ကိုကျော်လိုက်ပါ၊ ငါတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ပြန်ဆုံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်တကယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်အချိန်မကြာခဲ့ပါ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် (သင်ရိုသေလေးစားခံရသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ထံမှမျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့) ဆက်ဆံရေးသည်နောက်တစ်ဆင့်တက်ခဲ့သည်။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ငါတို့တွေအရမ်းကောင်းတဲ့ညတွေအများကြီးအတူတူရှိပြီးငါပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါနိုးထလာရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ နံနက်ယံ၌ထ။ စိုက်ထူခြင်းကဲ့သို့သောငါပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားခဲ့သည်။ (စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အချက်အလက်များကိုစိတ်မကောင်းပါ။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ဤအချက်သည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်) ထူးထူးဆန်းဆန်းမပြောဘဲနေကြ၏။ အကြှနျုပျ၏လိင် drive ကိုထိုးကျလာခဲ့တာနှင့်ရလဒ်သည်အတိုင်းဆက်ဆံရေး၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးစင်မြင့်ဖြစ်သင့်သောအရာကိုအတွက်နွေးထွေးမှုကိုပြု၏။ ငါဒုက္ခ၌ရှိ၏။
ဤသည်ဤမျှလောက်ငါဆရာဝန်များမှငါပုံမှန်အထီးဖြစ်ခြင်းအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားရာတစ်ခုခုသည် သွား. ငါ့ကိုစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆရာဝန်လျင်မြန်စွာငါ့အလက္ခဏာတွေနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ပင်ကျွန်မရှိခြင်းခံခဲ့ရသော်လည်းငါ့ပြဿနာနဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့ကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည်ကဖြစ်နိုင်အောင်ဘာကိစ္စကို၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့သည်နှင့်ပင်အမှုအရာပုံမှန်ထက်မှပြန်လာသောမတိုင်မီအချိန်ဘောင်ပေးနိုင်ခဲ့သလဲ
၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဇီဝဗေဒပညာရှင်မဟုတ်သော်လည်းသူမ၏ကောက်ချက်ချမှုအရ porn သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝ ဦး နှောက်ကိုတုန့်ပြန်ခြင်း၊ dopamine ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သင်၏လိင်စိတ်ကိုစွဲလမ်းစေခြင်း၊ ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင်သင်ခက်ခဲ (pun pun) ရရှိရန်ခက်ခဲသည်။
ဒါပေမယ့်ငါ porn ကြည့်တာကိုချက်ချင်းပဲဒီမိန်းကလေးအသစ်ကိုစကြည့်တာနဲ့အစမှာအဆင်ပြေတယ်၊ ငါပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်လုပ်သင့်သလား။ အဲဒါကငါ့ကိုကုသပေးပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့“ ဆင်းလာ”:
porn, အအေးကြက်ဆင် Quit ။ ရိုးရှင်းညာဘက်အသံ? ဒါဟာဆင်းလာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအံ့သြစရာရှိနိုင်ပါသည်ထွက်လှည့်:
ပထမ ဦး ဆုံးရက်အနည်းငယ် - ကြီးမားသောလိင် drive ။ရောဂါလက္ခဏာများ - Horny, horny, horny
ယေဘူယျအားဖြင့်ပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်သည်သင်၏ဘ ၀ မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ယုတ္တိရှိပုံရသည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ချိုချိုသာသာဖြစ်လိမ့်မည်။ နှိုးဆွခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပြanနာမဟုတ်ပါ။
ဒုတိယအပတ် - ပြီးဆုံးသည် ဆင်းရောဂါလက္ခဏာများ - လိင် drive ကိုလုံးဝဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း (ဆရာ ၀ န်မှကိုးကားသောသုံး ဦး လုံး)
ဤသည်ငါ့ကိုတုန်လှုပ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူအတော်များများဟာလုံးဝပယ်ပိတ်သင့်ရဲ့လိင် drive ကို၏အတွေ့အကြုံရှိသည် ဖြစ်. , သင်တို့သည်နောက်တဖန်နေဆဲအလွန်လိင်ဆက်ဆံလိုသောရှိနေသော်လည်းကိုယ်ထိလက်ရောက်နှိုးဆော်ခြင်းရ။ ဤသူသည်ငါပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါသည်သဘောပေါက်ရှိရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုလိုသင်သည်သင်၏လိင် drive ကိုပြန်လည်ညစ်ညမ်းမှဖွင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်, ဒီအတိအကျလုပ်ဖို့မှားအရာဖြစ်ပါသည် သငျသညျ 1 နှစ်ထပ်ကိန်းမှပြန်လာအဖြစ်။
8 ပတ်အထိ - အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူ။ရောဂါလက္ခဏာများ - လိင်မောင်းနှင်မှုပြန်လာခြင်း၊ မထွက်ခွာမီထက်နှိုးဆွမှုပိုမိုလွယ်ကူသည်။
၎င်းသည်သင်၏ porn အသုံးပြုမှုပမာဏနှင့်ကြာချိန်၏အတိုင်းအတာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော် ၈ ပတ်ကြာအခမဲ့ရုပ်ပုံများကသင့်ကိုချိုသောဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုကိုပြန်လည်တွေ့မြင်မည်ဟုဖော်ပြနေပုံရသည်။ ငါသီတင်းပတ်နှစ်ပတ်သာရောက်ပြီး 'လုံးဝပိတ်ပစ်ခြင်း' ကိုကျော်လွန်ပြီးချဉ်းကပ်ပုံသို့ပြန်လာသည်ကိုခံစားရသည်။ သင်သည်ပုံစံကိုပြန်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ တစ်အများကြီးလျှော့ချမှုနှုန်းမှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ကိစ္စတွေပြန်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ဒါပေမယ့်အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှပြန်လာသောသင်တို့သည်နောက်ကာလ၌သင်၏မြင့်သိပ်သည်းဆ dopamine ပြင်ဆင်ချက်ရရှိရန်လိုအပ်နေမြင်လိမ့်မည်။
ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ porn ကိုဆက်သုံးတာလဲ၊ မကောင်းတာတွေမရှိဘဲတက်ကြွတဲ့လိင်ဘဝကိုပြန်စတာပါ။ အလျင်အမြန်ကြည့်ရှုနေသည့်ရာနှင့်ချီသောလူများသည်ဆက်လက်သုံးစွဲနေစဉ်တွင် ED ပြissuesနာများစတင်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းဂူဂဲလ်အမြန်ကသင့်အားပြလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံး၌၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်တက်စေရန်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားရန်အတွက်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုပိုမိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သောကြောင့်အမျိုးသားများသည်ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်နိုင်ချေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ထိုကောင်လေးဖြစ်ပါကညနေခင်းတွင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအိမ်သို့ခေါ်သွားပြီးအာရုံကြောများကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်လျှင်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမပါဘဲနှိုးဆွနိုင်ခြင်းမရှိပါကအခြေအနေကိုအခြားစဉ်းစားပါ။ သင်စွဲလမ်းနိုင်သည်။ porn သို့
/ Dons မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်-အထောက်အထားဝတ်စုံကို
ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကငါဟာတခြားဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံခဲ့ရတယ်။ ငါ့ရဲ့စိုက်ထူမှုနှင့်နှိုးဆွမှုအစပျိုးမှုတွေဟာအဲဒီအသက်အရွယ်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါအသက် ၁၆ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့မိန်းမတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူး၊ မှန်ကန်တဲ့အရာကိုငါစောင့်ချင်ခဲ့တယ်။ ငါနောက်မှရှင်းပြလိမ့်မည်!) ။
သူတို့အားငါးနှစ်အတွင်းဈအင်တာနက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်း၏စည်းစိမ်ကိုမရရှိနိုင်ပါနဲ့ကိုယ်က arousal ၏လမ်း၌ငါ့ကိုအများကြီးလုပ်ဖို့မဟုတ်စတင် beacuse နှစ်ပေါင်းများစွာက၎င်း၏လိုက်တယ်အတွက်တိုးပွားလာတစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာကစောင့်ကြည့်မယ်။ ဒါဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုခဲ့အချိန်အားဖြင့်ငါ၏အစိုက်ထူခက်ခဲများနှင့်အရအများကြီးပိုခက်အဖြစ်ထက်ဝက်ခဲ့ကြသည် 22 သောအချက်မှရတယ်။ ဒါဟာရိုးသားဖို့အတော်လေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ကိုယ့် 24 အခါကိုယ့်ဟောင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိုင်အောင်ငါ့ကိုထိခိုက်စေပါဘူး။
ကျနော်တို့အတူတူတယ်ကရပ်နေမှလာ။ ကိုယ့်မှာအားလုံးတစ် ဦး စိုက်ထူရနိုင်ဘူး banging သောအခါ, ငါတောင်ယခုအထိကြိုးစားရန်ကအလုပ်လုပ်ရန်လိင်တံစုပ်စက်နှင့် Viagra ကြိုးစားနေပေမယ့်ရွားလှဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သိသွားတဲ့အချိန်မှာသူဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ကိတ်မုန့်တစ်လုံးပါ။ သူမသည်သူမကြောင့်၎င်းကိုသွားတွေ့လိမ့်မည်ဟုပြောဆိုလေ့ရှိပြီး၊ သူမပြcompoundနာကိုပိုဆိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကိုစိတ်ကူးကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမယ့်ဒါဟာအကြီးအဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့သူမကကျွန်မကိုအတော်လေးရက်စက်စွာဆက်ဆံခဲ့လို့ကျွန်မဟာသူမနဲ့အတူတစ်လအတွင်းသူမနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးနောက်တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကြောင့်ကျွန်မပြproblemနာကအများကြီးပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကသဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထများမှာများစွာတိုးတက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာကြည့်လျှင်၎င်းသည်ဤတွင် မရှိ၍ ၎င်းကိုများစွာကူညီသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်တုန်းကငါ့စိုက်ထူမှုဟာမလွယ်ကူလှတဲ့အပြင်ငါအရမ်းရှည်လျားစွာမသွားနိုင်တော့ပါ။ (နောက်ထပ်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်အလျင်အမြန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်) သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လိင်သည်။ ဘဝဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးပုံမှန်ပါပဲ။
ဒါ့အပြင်သင့်ကိုဒီအပင်ကြောင့်ပျက်စီးစေတဲ့အသီးကိတ်မုန့်တစ်လုံးနဲ့မရသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ငါကဒါကိုဘုံအဖြစ်ပြောတာကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ သူကတခြားလူတွေကိုကူညီတယ်ဆိုတာဘယ်သူသိလဲငါဂရုမစိုက်ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီး၊ ယခုအခါ ၂ နှစ်ကျော်အထိ ED လက္ခဏာများကိုရုန်းကန်နေရသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကတိသစ္စာပြုထားသည့်ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ GF သည်အလွန်အထောက်အကူပြုသော်လည်းလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာစိုက်ထူထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရပ်တန့်သွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုသည်ချက်ချင်းယိုယွင်းလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထင်သင့်သည်အတိုင်းမခက်ခဲ့ပါ။ ရံဖန်ရံခါငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းစိုက်ထူလုံးဝဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ အခြားအချိန်များကကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အ ၀ စိုက်ထူနိုင်မှုနည်းသော်လည်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန် (တစ်ခါတစ်ရံမြန်ရန်) အခက်အခဲမရှိပါ။ ငါကဘတ်စကတ်ဘောကစားခြင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရောဂါလက္ခဏာတွေရဲ့အဆိုးဆုံး (နှင့်ငါအရင်စဉ်းစားခဲ့တယ်) ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စက (ဒေသခံအာရုံကြောပျက်စီးခြင်း၊ သွေးကြောပျက်စီးခြင်းစသည်တို့ကို) ငါအရင်ကပြanနာတစ်ခုသတိမပြုမိခဲ့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါပြန်စဉ်းစားမိရင်အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်သတိရမိတယ်။ ငါကအတိတ်ကစိုက်ထူမှုတွေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကိုကြီးလေးတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုခဲ့ဘူး။
လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရောဂါလက္ခဏာများကဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီသို့ ဦး တည်သွားသောမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးဆရာ ၀ န်ကိုတွေ့ရန်လမ်းပြသည်။ ကျွန်တော့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကပုံမှန်ပဲ။ သူဟာဆီးကြိတ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုစစ်ဆေးတယ်၊ အရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်စေရန်“ Performance Anxiety” နှင့် Levitra နမူနာကိုပုံမှန်ရောဂါလက္ခဏာပြစေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးသိသာထင်ရှားသောလက္ခဏာများမတိုင်မီကျွန်ုပ်၏အရည်အချင်းများကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိခဲ့သောကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာကိုကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရုတ်တရက်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေရသနည်း။ လီဗရီထရာကကျွန်တော့်ကိုစိုက်ထူပေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဖြေတော့မဟုတ်ဘူး။ အသက် ၂၄ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါအရမ်းစွဲမက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဆေးလုံးကိုမှီခိုဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။
နောက်တဖန်သူမထောက်ခံခဲ့သော်လည်း, ကဆက်ဆက်ငါ့အဘို့ဒုက္ခခံစားခဲ့ရခဲ့ပါတယ်နှင့်ဆက်ဆံရေးခံစားခဲ့ရသော်လည်းဤသည်မှာရုံငါ့အသက်ကို၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ဤအတူဆက်ဆံငါ့ကိုရလဒ်။ ငါကပဲပိုကောင်းကောက်ကာငင်ကာရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်နှစ်ဆယ်ကျော်တစ်လျှောက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက် porn ကိုသုံးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုစိတ်စွဲလမ်းမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး (ဇီဝကမ္မဗေဒကငါ့ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်) ။ ငါတကယ်ထိခိုက်နစ်နာစေသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုငါအပေါ်တူညီတဲ့နှိုးဆော်သံအဆင့်ကိုရသည့်အခါအချိန်အဖြစ်ပိုမိုခက်သို့မဟုတ်လူစိမ်း porn စောင့်ကြည့်မယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ED ရောဂါလက္ခဏာများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေစဉ် (လိင်တံအပါအ ၀ င်တစ်နေ့လုံးအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းကြောင့်အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်) လိင်စိတ်နိုးထစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောအတွေးအခေါ်ကိုတွန်းအားပေးလိမ့်မည်။ အခြေအနေကပိုဆိုးအောင်ခဲ့ကြသည်။ ငါချိုနေတဲ့ (လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေ၊ ပျင်းစရာကောင်းတာတွေ) အပြင်တခြားအကြောင်းတွေကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်။ ငါ့လိင်စိတ်နိုးထစဉ်ကအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့အပြင်ဒီပြissuesနာများထို့နောက်ပြproblemနာကိုပိုဆိုးစေသောစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်အတွက်ရလဒ်။
ယနေ့တွင်မပိုညစ်ညမ်းနေ့ 1 ဖြစ်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်ပြန်ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ဦးလေ့ကျင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်ငါ့ထံသို့သဘာဝကျပါတယ်။ ငါထွက်အလုပ်လုပ်တယ်နဲ့ကျွန်မသတိထားဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbities သူတစ်ဦးမဟုတ်ရင်ကျန်းမာသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုဒါကြောင့်ကျွန်မအလွန်အနေနဲ့အခြားရှင်းပြချက်ကိုရှာကြပြီ။ ၏သင်တန်းအောင်မြင်မှုမရှိအာမခံချက်ရှိပေမယ့်အနည်းဆုံးကငါ့ကိုမျှော်လင့်ချက်နှင့်သတ်မှတ်ထားဖို့ရည်မှန်းချက်ကိုပေးသည်။ ယခုတွင်ငါသည်တစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်းကိုသကဲ့သို့ငါအရမ်းဒီအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါ့ကိုကျောရရှိသွားတဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဒီဆောင်းပါးအပေါ်ကိုမုန်းသည်လူအပေါင်းတို့ကိုဖြေလျော့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမပြောဆိုချက်ကိုဒီနှစ်ဆမျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းကိုဖန်ဆင်းရှိပါသည်။ သူတို့က porn သို့မဟုတ်ယင်း၏စောင့်ကြည့် damning ဒါမှမဟုတ်သူတို့လုပ်ချင်ဘာလုပ်နေလဲရပ်တန့်ရန်မည်သူမဆိုပြောပြကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ကရိုးရှင်းစွာအခြို့သောလုလင်တို့သည် ED ကြုံတွေ့နှင့်ဖြစ်အလွန်အကျွံ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောဘုံချည်ကြောင်းကြောင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်ရေးသားထားကြသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကတော့ porn ထွက်ဖြတ်တောက်မိမိတို့၏ရောဂါလက္ခဏာအတွက်ကျဆင်းခြင်းရှိသည်ကဤလူတို့သညျအခြို့ကိုပြသတော်မူကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်။ ကြွင်းသောအရာသီအိုရီနှင့်ယုတ္တိကွေးမြားဖြစ်ပြီးသူတို့ကပိုဘာမျှအခိုင်အမာပါပြီ။ ဘာမျှတခြားဒီတစ်ခုများအတွက်ပညာရေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လုလင်တို့သည်သူတို့တစ်ဦးတည်းမဟုတ်သင်သိရပေးနိုင်ပါတယ်နဲ့ကျွန်မတယ်ဆိုရင်ကြောင်းတန်ဖိုးထားတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်လှပသောရည်းစားတစ် ဦး ရခဲ့သော်လည်းစိုက်ထူမှုကိုမစောင့်နိုင်တော့သလော။(self.pornfree)
by Climbing_a_Mountain20 နေ့ရကျ
ဒါကြောင့်ငါ PMO အခမဲ့နေချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရလာတယ်။ စွမ်းအားကိုတစ်နေရာရာမှာအကျိုးရှိပြီးအမှန်တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ပျော်စရာပျော်စရာနည်းလမ်းသစ်တွေရှာနေတာကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကိုမင်းကိုဆွဲဆောင်ဖို့မခက်ဘူး။ အလွန်အလွယ်တကူ wow အဆိုပါရေဒါအောက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်! ငါ့ကို porn порပေးသော ED ကိုပေးသောကြောင့်သို့သော်အင်ဒီ PMO shit ရဲ့အဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သူမသည်အပျိုစင်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုလိင်တံထိပ်ဖျား၌သာထည့်သွင်းစေလိုသည်။ သူမထက် ပို၍ မသောက်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လုံလောက်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုမခံစားရပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပျော့ပျောင်းသွားသည်။ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်နာကျင်မှုကိုခံစားနေရသော်ငြားယခုသူမသည်ကိုယ် ၀ န်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကွန်ဒုံးသုံးရန်အလိုရှိသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုလှုံ့ဆော်မှုမပြုဘဲမထားနိုင်ခြင်းသည်၎င်းကိုမထင်မှတ်သောကွန်ဒုံးနှင့်ပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပုံပေါက်သည်။
ဒါကြောင့်တကယ်ရှေ့၌သင်တို့စိတ်ကိုအတူတက် fucks # လုပ်ပါတော့တယ်ဒီငါသည်ဤ porn သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်ဖို့အခြားသူများကိုအကြံပြုချင်သည်ငါ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်ငါပင်ပေါ်ကွန်ဒုံးနဲ့နဂါးကြီးနဲ့ကျွန်မနောက်ကျောကသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရချင်!
28 နှစ်အရွယ် + ရည်းစား + ကိုယ်ပိုင် Discovery ၏ ED = 90 နေ့ခရီး
by JungleFever241 နေ့
ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် (သို့) ကင်းမဲ့ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုအမြဲသံသယရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုများကိုအတည်ပြုသောအတ္တလန္တိတ်ရှိဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်မဖတ်မှီအထိဖြစ်သည်။ ED နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြသနာသည်အသက် ၂၂ နှစ်ခန့်တွင်ကောလိပ်၌စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့သည်၊ သို့သော် porn သည်ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အရာအားလုံးကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်သောလှပသောအမျိုးသမီးများနှင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်သောအရာတစ်ခုကိုဆောင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ညနေခင်းထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုများကပိုမိုကြာရှည်စွာရိုက်ခတ်လာသည်။ ငါ၌တက်ကြွသောလိင်ဘဝရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်လုံးဝကျပန်းဖြစ်သည်။ တခါတရံငါထပေါ်လာလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါထင်ထားတာကငါဟာအရမ်းကိုအရည်အချင်းရှိပေမယ့်မသောက်နိုင်လောက်လို့စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ပါ။ လှပပြီးလှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်“ မထနိုင်” ရန်အကြောင်းပြချက်ပေးရန်ရှက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုလ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှစ်ပေါင်းများစွာ, ငါ့တာဝန်များကိုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်၏အချက်အထိပေမယ့်အမြဲတမ်းညစဉ်ညတိုင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှစ်ပေါင်းဆက်ပြောသည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီးကောင်းမွန်သောဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂရုစိုက်သည့်ရည်းစားတစ် ဦး နှင့်အတူ ED နှင့်အတူဒုက္ခရောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမအတွက်ယေဘူယျအားဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုအရည်အသွေးသည်ကွဲပြားပြီးတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်ဖြစ်သင့်သည်ကိုသိသောအခါစိတ်ထဲမနေပါ။ ငါလိင်တူချစ်သူလားဆိုတာတောင်မှမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်၊ ငါနဲ့ပြproblemနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါဟာမိန်းမတွေကိုချစ်တယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ - ၁၆
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ၊ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုစတင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ပုံပန်းနုများ (Boobs)၊ ဒီအဆင့်မှာငါ ၁၂ နှစ်ရှိပြီ။ အခုငါအမာခံ porn ခံစားခဲ့ရပြီးပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်။ ထိုအခါအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်အားစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိတော့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်သည် tab များနှင့်သေဆုံးခြင်းများကိုစတင်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်စိုက်ထူခြင်းကိုမခံနိုင်တော့ဘဲ၊ flaccid / semi-flaccid ကိုငါပြုခဲ့တုန်းကငါဟာ porn အသစ်နဲ့သေခြင်းတရားကိုဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းအားဖြင့်ဒီအတိုင်းပြုခဲ့တယ်။ ငါ ၁၆ မရောက်ခင်အထိဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်
ဒါကြောင့်ငါပြုခဲ့ပြီးပြီငါ porn သို့မသွားခဲ့ဘူး3/ 4months ငါသည်လည်း orgasm မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ကျပန်းတစ်ပိုင်းတိုးတက်မှုများကိုသတိပြုမိလာတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်လို့တောင်မှယုံပေမယ့်တစ်နေ့မှာငါအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါကုန်းဆင်းသွားတယ် (chaser) ငါအော်ဂဇင်ကိုစောင့်နေတယ်၊ ​​ဒါက porn ကိုတောင်မှမကောင်းဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုဆုံးရှုံးသွားပြီးအခုဆိုရင်ငါတိုးတက်မှုကိုပြန်လည်စတင်ဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ porn ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ငါ့မေးခွန်းတွေဒီခန့်မှန်းချက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ (ခန့်မှန်း)? အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ PENIS Shrunk ရှိသနည်း - မည်သည့်အကြံပြုချက် / ထောက်ခံမှုမဆိုတန်ဖိုးထားခံရလိမ့်မည်
ကျွန်တော်အသက် ၂၇ နှစ်ပါ။ ငါ porn ကိုမှတ်မိနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည် (အလေးအနက်ထား, ငါကလေးတစ် ဦး အဖြစ်မဂ္ဂဇင်းများကိုရှာဖွေလေ့ရှိတယ်သူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်) ။ Fapping ကို ၁၃ နှစ်ခန့်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး၊ အနှစ် ၂၀ ခန့်တွင်အင်တာနက် porn ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအားလုံးသည်တောင်ကုန်းပေါ်သို့ဆင်းသွားခဲ့သည်။
အရင်တုန်းကအရက်မူးရင်တောင်ထဖို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက် porn ကိုစပြီးလေ့လာပြီးနောက်ငါရည်းစားနဲ့ ED ချွတ်ယွင်းချက်တွေစတင်ခဲ့တယ် (သူမမျက်လုံးထဲမှာရယ်စရာကောင်းပေမယ့်) နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုစတင်သောအခါတွင်လည်းဖြစ်သည်။
ခြောက်နှစ်လောက်မြန်မြန်ရှေ့ဆက် - ထိုမိန်းကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးသည်ပြိုကွဲသွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမအပေါ်၌ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်မည်မျှစိတ်မ ၀ င်စားခဲ့သနည်း။ အကြှနျုပျ၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသောကြောင့်အရက်မပါဘဲမည်သူ့ကိုမျှအနီရောင်နှင့်ချွေးထွက်ခြင်းမရှိဘဲကမ္ဘာမြေကြီးကိုကျွန်ုပ်အားမျိုသိပ်စေချင်ခြင်းမရှိဘဲစကားမပြောနိုင်ပါ။ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တော့မှေးမှိန်သွားပြီ။ လက်ရှိမြင့်မားသောမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်အားလက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သောလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်သည့်လိင်စိတ်နိုးထစေသူအားတီထွင်စေခဲ့သည်။ ငါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အလေးအနက်ထားပါတယ်။ သူတို့စဉ်းစားသမျှနဲ့ငါလိုချင်တာတစ်ခုကငါချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဖြစ်ဖို့ပါ။
ဤအရာအလုံးစုံပြီးခဲ့သည့်လကငါ့အဘို့အ ဦး ခေါင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ယခုတွင်တစ်နှစ်ခန့် ၀ င်ရောက်ခဲ့ဖူးသောမိန်းကလေးတစ်ယောက် (လေးနက်စွာပူပြင်း) ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်လက်တွေ့ကျသောအချစ်ဖြစ်သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အခွင့်အလမ်းရ ...... ဘာမျှမ။ အဲဒီမှာသူမကကျွန်မရဲ့အိပ်ရာထဲမှာအဝတ်အချည်းစည်းမရှိဘူး၊ ကျွန်တော့်စိတ်ကအဲဒါထက်ပိုပြီးလိုချင်တယ်၊ ငါယုံနိုင်ဘူး။ အလေးအနက်ထားပြီးနောက်စိတ်ကျရောဂါတယ်။
အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါကအရက်နဲ့ဆက်စပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ငါလည်းဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်သည် (ဟုတ်တယ်၊ ငါအရမ်းမိန်းကလေးပါ။ ကြက်ဆင်ကဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါဘယ်လောက်တောင်ဒေါသထွက်ခဲ့တာလဲ) ဒါပေမယ့်ခဏအကြာမှာငါ့ဆီစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကနေ့စဉ်ပစ္စည်းပစ္စယတွေကနေကြည့်တာလိုမျိုး rendomm စိုက်ထုတ်မှုမျိုးဘယ်တော့မှရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ စကတ်တိုတိုနဲ့မိန်းမတစ်ယောက်
ထိုအခါနိဂုံး ... ။ ပင်ညစ်ညမ်းသော porn ငါ့ကိုငါ့ကိုအပြည့်အဝခက်ခဲရဖို့ပျက်ကွက်နေသည်။ google အမြန်ရှာဖွေခြင်းကသင့် ဦး နှောက်နှင့် porn ဟုခေါ်သောဆိုဒ်တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးအရာအားလုံးကိုရှင်းပြသည်။ porn ကငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားစေတယ်လို့ဘယ်သူထင်မလဲ ??
သူတို့ကိုငါဒီနေရာကိုလာပြီးဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြသူတွေဆီကနေအောင်မြင်မှုပုံပြင်တွေအားလုံးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၅ ရက်ပတ်လုံးလိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ညက Ive ကိုကျပန်းခက်ခဲစွာနဲ့နိုးထခဲ့တယ် - မေ့သွားတယ်။
ငါ့ဘဝကိုပြန်ရဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ ဒါကတောင်ငါ့ရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုကိုပျောက်ကင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ငါကအနည်းဆုံးတော့လိင်ထပ်မံပျော်မွေ့ချင်တယ်။